mpilalao sarimihetsika, mpitendry gitara, Taylor Swift, mpamoron-kira, mpihira
Taylor Alison Swift(* 13 December 1989) dia mpihira Amerikana, mpamoron-kira ary mpamoron-kira. Nihalehibe tao Wyomissing, Pennsylvanie izy ary nifindra tany Nashville, Tennessee, izay nanombohany ny asany ho mpihira popy. Nanasonia fifanekena tamin'ny labiera tsy miankina Big Machine Records izy ary lasa mpilalao toniziana tanora indrindra nokaramaina tamin'ny Sony / ATV Music Publishing. Efa taorian'ny famoahana ny rakikirany voalohany (Taylor Swift) tao 2006 no nanjary kintan'ny mozikan'ny firenena. Ny singa fahatelo, "Our Song", dia nanendry azy ho mpihira malaza indrindra hanoratra hira tsy misy fanampiana ary namoaka hira iray izay nihazakazaka voalohany tao amin'ny Billboard Hot Country Songs. Nomena anarana izy ho an'ny loka Grammy ao amin'ny sokajyMpanazatra vaovao tsara indrindra(Mpanazatra tsara indrindra) ao amin'ny 2008.
Ny rakikira faharoaTsy Nanan-tahotradia navoaka tamin'ny faran'ny taona 2008. Niaraka tamin'ny fahombiazan'ny "Love Story" sy "You belong to Me" tao anatin'io sary io, dia nanjary mpihetsiketsika malaza ny albumy ary nahatonga ny rakitra tsara indrindra tamin'ny taona 2009. Nahazo ny loka Grammy efatra tao amin'ny 2010 ilay rakikira, ka nahatonga an'i Swift ny mpandresy Grammy tanora indrindra tamin'ny album "Album of the Year". Ny albumany fahateloMitenena ankehitrinydia navotsotra tamin'ny faran'ny 2010 ary namidy mihoatra ny iray tapitrisa tao anatin'ny herinandro voalohany. Nivezivezy haingana tamin'ny fitsidihana nandritra ny 13 volana tao amin'ny Speak Now World Tour, izay nilalao tao amin'ny kianja maromaro ary nahazo mpankafy an-tapitrisany tamin'ny alalan'ny 1,6. Ny roa "Indika" fahatelo dia nahazo Grammys roa. Ny rakikira fahefatra ao amin'ny Taylor Swift dia antsoinaRedary navoaka 22. Oktobra 2012. Ny mpitovo irery "Tsy mbola niara-niverina izahay" dia lasa mpitovo voalohany tonga hatrany an-tampon'ilay tohatratakelakaHot 100. Ny fitsidihana mena Amerikana avy amin'ny Red Tour dia nanomboka tamin'ny Martsa 2013. Navoaka tamin'ny faran'ny 1989 i 2014 farany farany an'i Taylor ary nanjary Shake It Off ny hira nahomby indrindra tao anatin'ilay rakikira. Nahazo an'i Grammy ihany koa izy tamin'ny "Album of the Year" sy ny "Best Vocal Album".
Taylor Swift no matetika lazaina hoe "Amerika Malala a!" Ary fantatra fa matetika mihira hira momba ny fitiavana. Musically, dia matetika ny teny tsotra hira amin'ny hira manintona, izay mahatonga ny olona iray saika avy hatrany antonona ho fanentanana (izany hoe. Hook) Toy ny mpamoron-kira no nahazo ny Nashville Songwriters Fikambanan'ny ny fikambanana sy ny fikambanana Songwriters Hall ny Fame. Anisan'ny zava-bita hafa Taylor Swift folo Grammy Awards, American Music Awards enina, fito Firenena Association Music Awards, enina Music Academy Awards ny Firenena sy telo ambin'ny folo BMI Awards. Nandritra ny asa efa nivarotra 22 tapitrisa mahery Albums ary ny 50 tapitrisa hira alaina amin'ny aterineto. Ankoatra ny asa ny mozika, Taylor Swift nanandrana ny anjara asan'ny mpilalao sarimihetsika iray niseho tamin'ny fizarana ny CSI Las Vegas ao 2009, ao amin'ny hatsikana The St. Valentine (2010) sy ny animation sarimihetsikaThe Lorax(2012).Forbesdia manombana fa nahazo vola an-tapitrisa dolara izy noho ny asany tamin'ny 165. Ho an'ny 2013, nahazo vola an-tapitrisa dolara (40 tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa) i 789, izay ny ankamaroan'ny indostrian'ny mozika.
Taylor Alison Swift dia teraka 13. Desambra 1989 ao amin'ny Reading.Ny rainy, Scott Swift, dia mpanolotsaina ara-bola an'i Merrill Lynch.Nihalehibe tany Pennsylvanie izy ary taranaky ny filoham-panjakana telo.Ny reniny, Andrea Swift (nee Finlay), dia miasa ao an-tokantrano ary niasa toy ny tale mpitantana ny famatsiam-bola.Nandany ny folo taona voalohany niainany tany Singapore izy, avy eo dia nipetraka tany Texas ny fianakaviany; Ny rainy dia injeniera mpanao biriky ary niasa tany Azia atsimo atsinanana.Taylor Swift dia nantsoina taorin 'ny mpihira James Taylor; Nino ny reniny fa hanampy azy (Taylor) amin'ny fananganana orinasa orinasa iray.Hoy i Taylor: "Nieritreritra i Mama fa mety ho tapa-bolana i Taylor hametraka karatra fandraharahana, satria tsy ho fantatry ny olona izay mamaky azy raha lahy na vavy."Manana zandriny lahy izy, Austin, izay nianatra tany amin'ny Oniversiten'i Notre Dame,fa avy eo dia nody tany amin'ny Oniversite Vanderbilt.Taylor Swift dia nandany ny fotoam-pianakaviany tany amin'ny toeram-pambolena hazo tao Montgomery ary nanatrika ny sekolin'ny Wyndcroft nalaina.Rehefa Taylor, tamin'izy sivy taona, ny fianakaviany nifindra tany Wyomissing, Pennsylvania, izay Taylor Nanatrika sekoly fanabeazana fototra any Andrefana Mamaky Teny sy Wyomissing High School Area Junior / Senior High School.Nankalaza ny fialantsasatry ny lohataona tao an-tranon'ny ray aman-dreniny tao Stone Harbor, New Jersey izy, izay manoritsoritra azy ho toy ny toerana nahatsiarovana ny ankamaroan'ny fahatsiarovan'ny fahazazany.
Ny fialamboly voalohany nataon'i Taylor dia nitondra soavaly iray. Ny reniny dia nametraka azy tao anaty lasely rehefa sivy taona izy; Nifaninana tao amin'ny fampisehoana ry zareo.Ny fianakaviany dia nanana kamboty amerikana maro sy ny liona Shetland.Tamin'ny faha-9 taonany dia nitodika tany amin'ny teatra mozika i Taylor ary notontosaina tao amin'ny Akademia Musics Academy Berks Youth Theatermenaka,Annie,Bye Bye BirdienyNy Feon'ny Mozika.Nankany Broadway matetika izy mba hihira sy hanao asa. Saingy taorian'ny taona maro nandefasana bankirompitra tany New York rehefa tsy nahazo na inona na inona izy dia nanomboka nitady mozika an'ny firenena i Swift.Hatramin'izay fotoana izay, nandany ny faran'ny herinandro nataony tamin'ny fetibe an-toerana, tsena, cafés, fifaninanana karaoke, klioban'ny zaridaina, scouts ary hopitaly.Roa ambin'ny folo taona taorian'ny ezaka maroNahazo fifaninanana talenta teo an-toerana i Swift ka nihira ilay hira "Big Deal" avy amin'i LeAnn Rimes ary nahazo fahafahana hanao laharam-pahamehana an'i Charlie Daniels tao amin'ny ambaratonga amoron-dranomasin'i Strausstown.Noho ny fitiavany ny mozika any amin'ny firenena, dia nanomboka nitoka-tena tamin'ny mpiara-mianatra aminy izy.
Taorian'ny fijerena ilay fizaranaAorian'ny Musicmomba ny Faith Hill, Swift dia nino fa "misy firenena mahagaga antsoina hoe Nashville, izay miova ny nofinofy sy ny toerana tokony haleha."Nandeha niaraka tamin'ny reniny nankany Nashville izy noho ilay fiatoana amin'ny lohataona, izay nahatonga azy namoaka ilay sarimihetsika Dolly Parton sy Dixie Chicks teo ambany mason'ny Music Row.Rehefa nanda izany ny mpitory maromaro, dia hitany fa "te hanao izay rehetra nataoko ny olona rehetra ato amin'ity tanàna ity. Koa dia nilaza aho fa mila mijery ny fomba maha samy hafa azy aho. "Nanomboka nihira ny Star Spangled Banner amin'ny hetsika ara-panatanjahantena isan-karazany satria fahafahana mba mialoha 20 000 mpanatrika nefa tsy voatery manana fifanarahana amin'ny orinasa ny firaketana an-tsoratra.Tany am-piandohan'ny lalao basketball Sixers tao Philadelphia, i Taylor, 11 taona dia namely ny mpiangaly rap Jay-Z rehefa nihira ny hiram-pirenena.Tamin'ny roambinifolo, ny mpanamboatra solosaina dia nampiseho ny tady gitara telo ary nanentana azy hanoratra ny hira voalohany "Lucky You".Tany aloha dia nahazo fifaninanana poezia nasionaly izy niaraka tamin'ny tononkalo antsoina hoe "Monster in Closet", saingy nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nifantoka tamin'ny fanoratana hira izy.Ao amin'ny 2003 Taylor Swift nanomboka tamin'ny ray aman-dreniny mba miasa amin'ny mpitantana mozika Dan Dymtrowem avy any New York. Noho ny fanampiany nanao dokam-barotra modely ho an'ny Abercrombie sy Fitch ao anatin'ny ny fanentanana "fiakaran'ny kintana", iray amin'ireo ny hira dia tafiditra tao an-panangonana rakikira Maybelline Cosmetics ary nihaona tamin'ireo lehibe mozika mpitory.Taorian'ny fihirana ny hirany tany am-piandohana tao amin'ny fampisehoana RCA Records, nahazo ny asa momba ny asa momba ny asa i Taylor Swift ary nanomboka nitondra fiara matetika tany Nashville.
Rehefa 14 taona i Swift, dia nifindra tany amin'ny sampan'i Nerrville i Merrill Lynch, ary nifindra tany amin'ny farihy farihy iray tany Hendersonville, Tennessee ny rainy.I Swift dia namaritra azy io tatỳ aoriana ho "fahafoizan-tena tsy manam-petra" avy amin'ny fianakaviany.Ny ray aman-dreniny dia naniry ny hampiseho izany ho fiovana amin'ny fiarahamonina feno fitiavana fa tsy fahafahana ho lasa kintana i Taylor.Hoy ny reniny: "Efa niteny taminy foana izahay fa tsy manao an'izany izahay, ary tsy misy nofinofinay."Tany Tennessee, dia nandeha nankany amin'ny sekoly Hendersonville High School i Swift, toerana izay nananany voalohany tamin'ny taona voalohany sy faharoa.Tatỳ aoriana, mba hitantana ny fandaharam-potoanan'izy ireo i Swift dia nifindra tany Aaron Academy, sekoly kristiana tsy miankina manolotra lesona an-tokantrano. 2008 dia nahazo mari-pahaizana momba ny ambaratonga faharoa taorian'ny nahavitany ny roa taona farany nianarany nandritra ny roa volana.
Fanombohan'ny asa aman-draharahaTaylor Swift(2004-2008)
Tamin'ny efatra ambin'ny folo, dia nifindra tany Nashville i Swift. Tao anatin'ny fifanekena tamin'ny RCA Records, dia nihaona tamin'ny mpihira efa za-draharaha toa an'i Troy Verges, Brett Beavers, Brett James, Mac McAnally ary The Warren Brothers.Farany dia nanomboka fiaraha-miasa maharitra niaraka tamin'i Liz Rose izy.Taylor Swift dia nahita an'i Liz Rose nandray anjara tamin'ny hetsika RCA ary nanolo-kevitra ny fiaraha-miasa.Nanomboka nihaona izy ireo ny alatsinainy tolakandro taorin 'ny nianatra tao amin'ny fotoam-piraketana.Nilaza i Rose fa ireo sessions ireo dia "ny sasany amin'ireo mora indrindra nataoko. Raha ny marina dia mpanoratra azy fotsiny aho. Nanoratra momba izay nitranga tany an-tsekoly izy (Taylor) tamin'io andro io. Azony mazava tsara ny zavatra tadiaviny holazaina. Ary tonga hatrany amin'ny hevitra tena mahagaga izy. "Nanomboka nanoratra horonantsary miaraka amin'i Nathan Chapman koa i Swift.Taorian'ilay fandaharana Circle Songwriter tao amin'ny The Bitter End, New York,Taylor Swift no mpaneva-tononkira farany indrindra nekena ho amin'ny Sony / ATV Music Publishing.Nandao ny RCA Records tamin'ny faha-15 taonany izy satria naniry ny hanoratra hira izay nosoratan'ireo mpamaky hafa, saingy nihevitra izy fa vonona ny hanomboka ny asany manokana amin'ny fitaovany manokana.Nanajanona ny fiaraha-niasany tamin'i Dan Dymtrow, mpitantana iray izay nitsara an'i Taylor Swift sy ny ray aman-dreniny tatỳ aoriana.Hoy i Swift: "Tena nahatsapa fiarandalamby aho. "Te-hisambotra ireny albums ireny aho nandritra ny taona maro, raha mbola azoko sary an-tsaina ny zavatra nataoko."Ny fampisehoana tao Nashville orinasa ny Bluebird Cafe Ny in 2005 teny hilaza ahy Taylor Swift nanondro Dreamworks Records mpanatanteraka Borchettu Scott, izay niomana ny hanorina marika tsy miankina, Big Machine Records. Taylor Swift dia lasa iray amin'ireo artista voalohany nanao sonia fifanarahana tamin'ny famoahana trano,ary ny dadany tao amin'ny trano famoahana vaovao dia nividy tsatòka telo isan-jato.Mba hampidirana azy ho any amin'ny firenena mozika, Borchetta Taylor Swift nandamina ny endriny tamin'ny Fetiben'ny Mozika CMA, izay niarahany niarahaba azy.
Nanomboka niasa tamin'ny rakitsary voalohany tsy fantatra i Swift fotoana fohy taorian'ny nanakatonana ny fifanarahana. Taorian'ny fanandramana nataon'ireo mpamokatra Nashville za-draharaha dia nokaramaina ny Big Machine mba hanakarana ny mpamokatra azy taloha Nathan Chapman. Izy no fotoana voalohany nanaovany rakitsary ho azy, fa i Swift kosa nihevitra fa ny fiaraha-miasa dia tsara ho azy ireo.Farany dia namokatra ny laharana an-tariby rehetra ho an'ny hira iray i ChapmanTaylor Swift. Izy tenany mihitsy no namaritra ilay rakikira ho toy ny diary tamin'ny fiandohan'ny adolescence.Ny ankamaroan'ny isa dia nosoratana nandritra ny taona voalohany tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ary nilazalaza ny zavatra niainan'ny fiainana vaovao ho fitiavana sy tebiteby voalohany amin'ny fahamaotinana.Nilaza i Taylor Swift fa na dia toa "toy ny manana tovolahy 500" aza izy dia nanoratra ampahany betsaka tamin'ireo hira ho mpandinika.Ny tononkira telo tao amin'ny rakikira dia nosoratan'i Swift irery, anisan'izany ny singles deux, ary ny valo sisa tavela amin'ny fiaraha-miasa amin'ny lisansa toa an'i Liz Rose, Robert Ellis Orrall sy Angelo Petraglia.Ilay rakikira dia nofaritana ho toy ny "fifangaroan'ny fitaovana nentin-drazana nentim-paharazana sy ireo kisarisary, gitara rock malaza."Taylor Swiftdia navoaka tamin'ny volana oktobra tamin'ny 2006.The New York Timesdia namariparitra ilay rakikira ho "sangisangy bitika amin'ny pop-country, izay hafahafa sy mahatsikaiky, tarihin'ny feony, mandresy lahatra ny tanora Swift."Roger Holland avy ao amin'ny gazetibokyPopMattersNanantena izy fa "ho afaka hahita fifandimbiasana eo amin'ny firenena malaza sy ny fahatsapana ny pop noho ny rakikira" i SwiftTaylor Swiftdia maneho fa manana zavatra maro hatolotra izy. "Sasha Frere-Jones avy amin'nyNy New YorkerNolazainy fa ho toy ny "ny prodigy" ka nidera azy tsy miraharaha ny mozika nomena karazan-dahatsoratra, ka raha ny toe-javatra dia Nashville mozika fa mpandala ny mahazatra, araka ny azy, dia tsy misalasala Swift mampiasa singa R & B, ny rap ary ny vatolampy. Nefa ny olona mihevitra ny fomba nentim-paharazana toy ny firenena Nashville-pop.Ao amin'ny tranokalaCountry Weeklydia naminavina fa "ny fitaovana mandresy lahatra dia manolotra talenta izay mitohy taorian'ny fianarana ambony." Vato mikodiadiany Taylor Swift nanoratra hoe: "Rehefa in 2006 tao anatin'ny enina ambin'ny folo, dia tonga teo amin'ny sehatry ny mozika sy ny bitany album, nitsoka na tanora na, fa samy miavaka matotra. (...) "Ny hira nataonay dia nopotehinay tamin'ilay horonantsary malaza tahaka an'i Britney na Patsy."
Publishing Big Machine Records mbola amin'ny fahazazany, rehefa namoaka ny voalohany tokan-tena lehibe "Tim McGraw" volana Jona 2006, ka Taylor sy ny reniny nanampy entana CD tokan-tena ao amin'ny valopy ary alefaso any amin'ny onjam-peo.2006 dia nandany ny ankamaroan'ny taona nampiroboroboana ilay rakikiraTaylor Swifttao amin'ny fantsom-pihetseham-peo, izay naneho hevitra hoe: "Mandritra ny enina herinandro ny fandehan'ny radio amin'ny ankamaroan'ny mpanakanto. Enim-bolana no nitrangako "Sary hosodoko haingam-pandeha haingam-pandeha (nentanin'ny Jackson Pollock) mba hanomezana azy ireo ireo mpihira tantara an-kira izay nampiditra ny hirany nandritra ny fandaharana.Nanao fe-potoana im-betsaka tamin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izy, toy ny fampisehoana Grand Ole Opry,Good Morning America,nyTRL.Niseho tamin'ny dokam-barotra maromaro izy, nanandratra ny liona jeans ary nanjary ny endrik'ilay fanentanana Wireless Mobile Music Verizon.Taylor Swift dia namaritra ny tenany ho "zaza Internet" satria nampiasa ny tambajotra sosialin'ny Myspace izy mba hahazoana mpankafy.Nanoratra ny blaoginy manokana izy, naneho hevitra momba ny satan'ny mpankasitraka azy, ary namaly azy manokana ny vaovao rehetra nalefan'ireo mpankafy azy.Tamin'izany fotoana izany dia fanonganam-panjakana tao amin'ny firenena.Borchetta hoy ny mpiara-miasa aminy nanangana ny volomasony in gaga rehefa nanapa-kevitra ny sonia fifanarahana miaraka amin'ny enina ambin'ny folo mpihira, fa Taylor Swift namely ny toerana maimaim-poana eny an-tsena: zatovovavy izay mihaino mozika firenena.Taorian'ny tokana "Tim McGraw" dia narahan'ny efatra hafa izay navoaka teo anelanelan'ny 2007 sy 2008 "Teardrops amin'ny My Guitar", "Ny Hira," "Sary handoro" sy "Tokony efa Said No". Rehetra dia tena nahita fahombiazana teo amin'ny takelaka Hot Firenena Songs, "Ny Hira" sy "Tokony efa Said No" tonga eo amin'ny handriny. Noho ny tokan-tena "ny Song," Taylor Swift lasa mpihira tanora indrindra, izay tokan-tena tonga ny ambony tany aloha tsy misy ny olona nanampy azy."Latsa-dranomaso noho ny guitare" dia nanjary mpihetsiketsika malaza ary nahatratra ny faha-drehetra ambin'ny folo tao amin'ny tohatratakelakaHot 100.Natao tamin'ny 39 000 ny albums tamin'ny herinandro voalohanyary tamin'ny Martsa tamin'ny taona 2011 dia namidiny tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa manerana an'izao tontolo izao ny 5.5.Navoakan'i Swift koa ny rakikira Krismasy,Ny feon-kiran'ilay seho: Ny Collection Taylor Taylortamin'ny oktobra 2007 sy EPBeautiful Eyestamin'ny Jolay 2008.
Ho fanohanana ny rakikirany voalohany, dia nanao zavatra betsaka i Taylor Swift; Ankoatr'ireo fampisehoana fety sy tantara an-tsehatra, dia nilalao tamin'ny fampisehoana tontolon'ny mpanakanto maro izy. Tamin'ny faran'ny taona, 2006 dia nanokatra ny fampisehoana ho an'i Rascal Flatts nandritra ny sivy farany teo amin'ny sehatry ny Me & My Gang Tour, nanoloana ny Premier Premier Eric Churche, izay notifirina.Nalefan'i Shift tatỳ aoriana ny rakitsorany voalohany tamin'ny alalan'ny fanamarihana iray: "Misaotra anao tamin'ny nilalaovako lava loatra sy tena mafy tao amin'ny Tours Flatts. Tena mankasitraka azy aho, Taylor. "2007 dia nanao fampisehoana roapolo tao amin'ny fizahantany George Strait,fampisehoana marobe tao amin'ny Flip-Flop Summer Tour Kenny Chesney,ny fisehoan-javatra noforonina ho an'i Brad Paisley ao amin'ny Tours Bonfires & Amplifiersary ny fampisehoana maromaro momba ny Soul2Soul II Tour miaraka amin'i Tim McGraw sy Faith Hill.Tao amin'ny 2008 Swift dia nilalao indray izy tamin'ny fitsidihan'i Rascal Flatts.Ankoatry ny fitaovany manokana, ny Taylor Swift dia naneho koa ireo hira avy amin'ny Beyoncé, Rihanna, John Wait, Lynyrd Skynyrd ary Eminem.Talohan'ny sy taorian'ny nanaovany ny fampisehoana dia naharitra ora efatra nandritra ny fotoam-pankalazana izy.
2007 Swift dia nandresy niaraka tamin'i Alan Jackson, mpanakanto ny taona Nashville Songwriters Association. Taylor Swift no mpihira faralahy izay azony hatramin'izay.Nahazo ny Horizon Award koa izy ho an'ny fikarohana vaovao indrindra momba ny Mozika tsara indrindra ao amin'ny mozika.Tao amin'ny 2008, ny Akademia momba ny mozika dia niantso azy ho mpihira tanora tsara indrindraary nahazo ny lokan'ny mpihira malaza indrindra any Amerika Music Awards.Ho an'ireo hira naseho tao amin'ny rakikiraTaylor Swiftnahazo fandresena fito BMI.Ao amin'ny 2008, i Taylor Swift koa dia nomena ny lokan'ny "Best New Artist Grammy", saingy tamin'ny farany dia very tamin'i Amy Winehouse.
2008 - 2010:tsy saro-tahotra,Mifamahofaho ny VMA, Grammy fiasco
Tamin'ny volana Novambra 2008 namoaka ny faharoa Studio album, Tsy Nanan-tahotra. Ao amin'ny rakikira fito nosoratany hira irery, anisan'izany ny roa tokan-tena sy ny sisa hira enina nosoratan 'ny mpamoron-kira Liz Rosa, John Rich, Collbie Caillat sy Hillary Lindsey. Ary niara-niasa tamin'ny mpamokatra raki-kira miaraka amin'ny Nathan Chapman. Musical noraisim-peo no mampiavaka ho "mafy gitara mahafinaritra, mampientam-po choruses, tsindraindray lokanga sy ny Banjo tucked ao amin'ny Mix." The New York Times dia nanoratra hoe: "Swift no iray amin'ireo mpamoron-kira malaza indrindra sady mitondra solontenan'ny amin'ny firenena. Manana fifandraisana bebe kokoa sy ny fiainana anaty noho ny ankamaroan'ny olon-dehibe. "Rolling Stone namaritra azy io ho" manam-pahaizana momba ny fanaovana voajanahary miaraka amin'ny fanomezana ho an'ny fanorenana andininy, AVERINA ISAN'ANDININY sy ny tetezana. Ny spinline hira manokana sy ara-bakiteny toa tahaka ny avy-ny ankizivavy předměstkého ny Diary. "
Miaraka amin'i Robert Allem, manohana ny rakikira tsy matahotra izy amin'ny famoahana azy. Ny fizarana iray tamin'ny fandaharana Ellen DeGeneres dia tao amin'ny fampisehoana. Niseho tao amin'ny talk-show maro hafa koa izy. Mampifandray azy amin'ny mpankafy mampiasa videoblogs manokana sy Twitter. Ny mpitovo voalohany tao amin'ny album "Love Stores" dia navotsotra tamin'ny volana septambra 2008 ary tao anatin'ny segondra monja dia lasa mpihira be mpividy indrindra hatramin'izay. Ny peakany dia tao amin'ny 4 tao amin'ny Billboard Hot 100. Nandritra ny taona maro, 2008 sy 2009 dia namela singa efatra hafa: "Poti-White", "Miaraka Aminao Aho", "Fifteen" ary "Tsy Tahotra". "Miaraka Aminao" no singa tsara indrindra voarakitra miaraka amin'ny tampon'ny 2 ao amin'ny Billboard Hot 100. Ilay rakikirity dia nipoitra teo an-tampon'ny Billboard 200 Album Chart niaraka tamin'ny 592 304 kopia tamin'ny herinandro voalohany, hatramin'ny namoahan'ity izao tontolo izao ny vola 8,6 iray tapitrisa. Ny rakikira dia lasa aloky ny varotra amin'ny taona 2009 ary nahatonga an'i Swift ho fahombiazana iraisam-pirenena.
Ho fanohanana ilay rakikira Fearless, dia nanao ny fitsidihana voalohany i Swift. Tahotra tsy misy fitsangatsanganana no nahitana ny 105. Ny 90 dia maneho any Amerika Avaratra, 6 any Eoropa, 8 any Aostralia ary ny iray any Azia. Ho an'ny tokotany tokana, John Mayer, Fait Hill na Katty Perry. Ny mpialoha lalana azy dia: Justin Bieber, Kelli Pichler ary Gloriana. Tour dia nitsidika mpankafy iray tapitrisa tamin'ny alalan'ny 1,1 ary nahazo iray tapitrisa dolara tamin'ny alalan'ny 65. Ny sarimihetsika Taylor Swift: Nalefa tamin'ny televiziona ny Travel to Fearless ary navoaka tamin'ny DVD sy Blu-ray. Ny fitsangatsanganana Keith Urban dia natao ho mpialoha lalana. Nahavita loka maro izy, ohatra: CMT Giants no nanao ny "Drive" an'ny Alan Jackson, tamin'ny 51. Ny fampisehoana Grammy dia nasongadina niaraka tamin'i Miley Cyrus sy Fifteen, ary nanoratra fanadihadiana momba ny fanolanana miaraka amin'ny T-Pain amin'ny CMT Awards izy. Nanoratra tetikasa maromaro ihany koa izy. Navoakan'i 2009 ny "American Girl" nataon'i Tom Petty. Miaraka amin'ny feony miaraka aminy izy dia manana ny "Half of My Heart" tokana an'i John Mayer, izay mahomby indrindra amin'ny rakikira fahefatra. Niaraka tamin'i Martin Johnson sy i Robert Eliss Orrael izy dia niara-niasa tamin'ny hira roa hoe "Ianao dia Hitady Anao Indray Home" sy "Crazier" hoan'i Hannah Montana: The Movie Soundtrack. K filmu Na sv. Ny Andron'ny Mpifankatia dia nanolotra hira: "Maivana ny androany. Tao amin'ny album Hope for Haiti dia nanoratra ilay hira "Breathless" tamin'ny Better Than Ezra izy.
Nanjary firenena voalohany mpanakanto mba hahazo ny MTV Music Awards, raha ilay hira "ho Anisan'ny amiko" vehivavy tsara indrindra lahatsary nandresy ny taona 2009. Ny fanekena teny saingy tapaka ny Kanye West, izay keriny ny mikrô avy any an-tànany ka nanao hoe: "Beoyncé manana ny tsara indrindra lahatsary." Swift dia mpankafy Andrefana ny mozika ary nilaza ny vaovao ny fihaonambe fa "tsy misy ratsy fihetseham-po azy." Ny zava-nitranga fa tena haino aman-jery ny saina ary nameno rohy ny aterineto maro. Andro vitsy voalaza tao anaty tafatafa: "Nanasa ahy West fialan-tsiny, ary nanaiky aho. Tena tso-po izy. "Amin'ny manaraka fanadihadiana, tsy nety hiresaka momba ny zava-nitranga, noho ny izay izy tsy te hanao" raharaha lehibe ". "Tao amin'ny fahitalavitra no nahitan'ny rehetra ny zava-nitranga. Tsy misy na inona na inona mba hiresaka momba ny. "Ny zava-nitranga sy ny sain'ny haino aman-jery manaraka ny mozika tena nanainga asany.
Ao amin'ny 2010 4 nandresy ny Grammy 8 ny isan'ny fanendrena. Tsy natahotra rakikira lasa Album ny taona sy ny firenena tsara indrindra rakikira. Ny hira "White Horse" nahazo Best Firenena Hira sy Best Vehivavy Performance peo. Lasa ny zandriny indrindra mandrakizay mpanakanto mba hahazo ny loka ho an'ny Album ny taona. Nandritra ny lanonana niaraka nihira hira Nicks Stevie "Rhiannon" sy "ho Anisan'ny amiko." Ny feo ratsy fampisehoana nahazo famerenana sy ny haino aman-jery be dia be niteraka fanoherana. Ny fihirana dia voalaza variously hoe "mahagaga ratsy" sy ny "tena, tena mahantra." Raha ny New York Times dia nanoratra hoe: "ny mamelombelona ny mahita olona iray tena manan-talenta flub zavatra." Ary "izany no tena zava-dehibe vaovao Pop kintana tao anatin'ny taona vitsivitsy." Ny mozika mpandalina Bob Lefsetz mialoha fa ny asa no hita "nandritra ny alina". Koa ampahibemaso nifidy ny handahatra ho an'ny rainy ka nanakarama "dokam-barotra Crisis mpandraharaha" ny fitantanana ity raharaha, satria "Taylor dia tanora loatra sy adala hahatakatra ny fahadisoana nataonao." Ny mpanao gazety Stevie Nick mpihira nitalaho hoe: "Taylor Mampahatsiahy ahy ny tenako tao amin'ny fanapahan-kevitra sy ny zaza manan-janaka. Ny tsy fananan-tsiny no mahatonga azy ho hafahafa sy tsy fahita firy. Manoratra ity tovovavy hira toy ny Neil Diamond na Elton John, izay mahatonga izao tontolo izao mihira. Vehivavy vato 'n' horonan-taratasy - firenena - Pop mpamoron-kira dia niverina, ary ny anarany dia Swift Taylor. Izy ireo dia vehivavy tahaka azy izay handeha hamonjy ny mozika. "
Nahazo loka maro hafa ny alahelony ary nanjary sarimihetsika sarobidy indrindra teo amin'ny tantara. Lasa ihany ny zandriny indrindra ary vehivavy mba handresy 6 mpanakanto ao amin'ny isan-Coutry Music Association. Tsy nanan-tahotra koa ny nahazo ny loka tsara indrindra tamin'ny Association. Swift no mpanakanto tanora indrindra mba handresy ny Album of the Year ao amin'ny Academy of Country Music. Ny loka amerikana dia nahazo ny lokan'ny firenena tsara indrindra ary nantsoina hoe Artist of the Year. Izy dia nahazo ny Hal David hazavan'ny kintana avy any Songwritter Hall ny Flame sy Nshville Songwritter Association atao hoe ny mpamoron-kira sy mpanakanto ny taona. Takelaka nidera ny mpanakanto ny taona 2009 ka tafiditra tao amin'ny lisitr'ireo olona nanan-kery indrindra tamin'ny taona 100 2010.
2010 - 2012:Mitenena ankehitrinyary fitsidihana manerantany
Tamin'ny volana oktobra 2010 dia namoaka ny lahatsary studio studio fahatelo Speak Now. Efatra ambin'ny folo hira rehetra nosoratany, ary niara-niasa tao amin'ny firaketana amin'ny mpamokatra efa ela Nathan Chapman. Mihira am-pilaminana ny rakikirany ankoatra ny firenena pop, ary indraindray dia mitaingina vato sy maloto pop. The New York Times momba ny tahirin-tsary ho toy ny bibidia, musically samihafa ary "loatra, angamba ny tsara indrindra." Magazine Rolling Stone namaritra Swift ho iray amin'ireo tsara indrindra songwriters in Pop, vato na ny firenena, "mailaka Mety ho nahay be Nashville matihanina izay mahafantatra ny fitaka ho an'ny famokarana hitsikerana, fa izy koa dia tovovavy romotra tsara. "
Ny raki-kira Lazao amin'i nanatontosa fampielezan-kevitra amin'ny dokam-barotra be dia be. Efa niseho tamin'ny isan-karazany mampiseho ny maraina sy ny lahateny fampisehoana, ary koa ny fampisehoana maimaim-poana ao amin'ny mini-toerana tsy mahazatra, toy ny. Ao misokatra roa-Decker fiara fitateram-bahoaka tao amin'ny Hollywood Boulevard na eo amin'ny fandraisam-bahiny amin'ny JFK lasa. Ankoatra ny Kris Kristofferson, Emmylou Harris, Vince Gill sy Lionel Richie dia tafiditra ao amin'ny Los Angeles Club Nokia amin'ny "gitara fitaomana" - mozika nifandimby an-tsehatra, ary nilalao Acoustic dikan-ny hira mba hanangonam-bola ho an'ny Firenena Music Hall ny Fame.
Ny voalohany tokan-tena avy ao amin'ny raki-kira "Ahy" Navoaka tamin'ny Aogositra 2010 sy bebe kokoa ny tokan-tena ny dimy taona 2010 sy 2011 dia: "Back to Desambra," "midika," "Ny Tantaram-Antsika", "fanidin'ny kilalaon'afo" sy ny "antsika". Ny raki-kira ara-barotra lehibe fahombiazana, debuting amin'ny tampon'ny US 200 takelaka tabilao. Varotra voalohany dia 1 047 000 dika mitovy, ary nanao ny fahenina ambin'ny folo rakikira ao amin'ny tantaran'ny Etazonia, izay nivarotra ny iray tapitrisa ao amin'ny iray herinandro. Tamin'ny volana Febroary 2012 Albums nivarotra maneran-tany indray 5,7 tapitrisa.
2011 taona sy ny fiandohan'ny taona 2012 nandeha tamin'ny fitsidihana ny rakikira. Part ny telo ambin'ny folo volana dia: 111 izao tontolo izao fitsidihana fampisehoana. 7 angon-drakitra any Azia, Eoropa 12, 80 ho 12 Amerika Avaratra sy Aostralia. Fantany mpihira maro izay nanatevin-daharana ny duet tokana nandritra ny fitetezam-paritra any Amerika Avaratra. Izy niara-niasa James Taylor, Jason Mraz, Shawn Colvin, Johnny Rzezniakem, Andy Grammez, Tal Bachman, Justin Biebrich, Selena Gomez, Nicki Minaj, Nelly, BoB, hampiditra, Flo Rida, TI, John Foreman, Jim Adkins, Hayley Williams, Hot nangatsiaka Rae, Ronnie Dunn, Darris Rucker, Tim McGraw sy Kenny Chesney. Nandritra ny fitetezam-paritra any Amerika Avaratra dia nanoratra ho an'ny tsirairay fampisehoana andinin-teny samy hafa ny hira teo amin'ny sandriny havia, ny lahatsoratra dia tokony ho hita toy ny nentin'ny alina ho peratra toe-po. Nandritra ny fitetezam-paritra, dia maro nilalao Acoustic dikan 'ny hira sy amin'ny isan-tanàna Nanome voninahitra ho azy ho toy ny mpanakanto ao an-toerana. Izy nanamafy fa dikan-tenin'ny hira namela azy ho tonga ho azy amin'ny tsara nambarany fa raha tsy izany předsavení. Ny fitetezam-paritra no nanatrika mihoatra ny 1,6 tapitrisa mpankafy ary nahazo mihoatra ny 123 tapitrisa dolara. Tamin'ny volana Novambra 2011 vadáno no voalohany velona album, Mitenena Ary World Tour Live izay 17 fampisehoana avy any Amerika Avaratra.
Amin'ny 54. Grammy Awards, ilay hira hoe "Mean" dia nahazo ny lokan'ny Best Country Song sy ny Best Country Solo Performance. Nandritra ny lanonana, dia nilalao koa ity hira ity. Izy dia nantsoina hoe Mpanentana ny taona avy ao amin'ny Akademia Music Music ao 2011 sy 2012, ary avy amin'ny Assocation Music Country ao 2011. 2011 no mpanaingo ny taona tamin'ny loka amerikana ary ny album Best Country Album no nantsoina hoe album. Billboar nantsoina hoe 2011 ilay Vehivavy nandritra ny taona.
Na dia tamin'ny taona 2012 aza no nahavitany ny rakitsariny fahefatra, nanasa azy i James Taylor mba ho tonga vahiny manokana nandritra ny tariny Tanglewood. Niaraka izy ireo nilalao ny hira "Fire and Rain" "Love Story" sy "Ours". James Taylor, izay nihaona voalohany tamin'izy valo ambin'ny folo taona, dia niteny hoe: "Nidina an-tsehatra fotsiny izahay. Tiako ny hirany sy ny fanatrehany teo amin'ny sehatra. "
Nandritra io vanim-potoana io izy dia nanolotra hira roa niavaka tamin'ny Soundtrack The Hunger Games. "Safe & Sound" dia nosoratana sy voarakitra miaraka amin'ny The Civel Wars sy T-Bone Burnett. Navoaka tamin'ny Janoary 2013 ilay tokan-tena ary efa nivarotra izany tamin'ny 1,4 tapitrisa tapitrisa tany Etazonia. Ny hira dia nahazo ny loka tsara indrindra ho an'ny Media Visual ho an'ny Grammy Award ao amin'ny 2013 ary nomena anarana ho an'ny Song Original Songs amin'ny 70. Golden Globes. Ny fandraisany faharoa ny "Sound Eyes" dia nosoratan'i Swift ary nosoratan'i Nathan Chapman. Izy koa dia nandray anjara tamin'ny fihirana ho an'ilay hira "Both of Us". Ny mpamokatra dia namoaka hira iray tao amin'ny rakikira faharoa BoB, Strane Cllouds.
2012-2014Redary ny fanorisorenana amin'ny lakolosy
Ny lahatsary famoahany studio Red dia navoaka tamin'ny Oktobra 2012. Izy tenany ihany no nanoratra 9 avy amin'ny hira 16 tao anaty rakikira. Fa ny sisa hira fito dia niara-niasa Max Martin, Liz Rose, Dan Wilsnem, Ed Sheeran sy Gary Lightbodym. Nathan Chapman niasa toy ny zokiny mpamokatra ny album, fa ny famokarana ny tsirairay ihany koa lalamby tafiditra Jeff Blasher, Butch Walker, Jacknife Lee, Dan Huff sy Shellback. Nilaza i Chapman fa nampirisika an'i Swift izy mba hiverenany ary hanandrana ny tenany amin'ny toe-javatra hafa. Musically, ny rakikira dia fanandramana amin'ny fo vatolampy, dubstep sy ny dihy Pop kokoa sypanéb eo, fa ny Arakaraka ny hamantatra Swift fomba. John Caramica o Red nanoratra hoe: "Tsy dia ampy antsipirihany sy nalalaka kokoa noho ny mahazatra. Ny raki-kira dia hitsahatra mody ho zavatra hafa ankoatra ny Pop megastar ary ny iray miaraka amin'ny olon-dehibe olana. Rolling Stones gazety nilaza hoe: "Matetika, izy niezaka ny hiditra ny fampianarana voatolotry ny razana kiato emociálnho sarintany toy ny Joni Mitchell sy Carole King ... ny tetikasa mamantatra sabe dia iray amin'ireo tsara indrindra tantara ny Pop."
Araka ny fanentanana Red 72 no solontenan'ny radio eran-tany Nalefa fiaramanidina tany Nashville, izay mandritra ny herinandro voalohany ny varotra olona nanao tafa sy dinika amin'ny Swift. Efa niseho tamin'ny maro TV fampisehoana ary nanao lahateny tao amin'ny lanonana loka mozika any Etazonia, Angletera, Alemaina, Frantsa, Espaina sy Aostralia. Ny hira malaza ao amin'ny "We Never Ever Getting Together Together" dia nanjary ny laharana 1 voalohany tao amin'ny US Billboard Hot 100. Tamin'ny 6 hafa ihany koa ny namoaka hira: "manomboka indray" (ho an'ny firenena onjam-peo) hoe: "Fantatro ianareo dia Olana" "22" "Efa Niova ny zava-drehetra" "fotoana farany" (ho an'ny rehetra Pop onjam-peo) sy ny "Red! (ho an'ny radio any amin'ny firenena). Ny rakitra mena dia nipoitra teo an-tampon'ny tabilao Billboard 200, ary iray tapitrisa ny 1,21 ho an'ny herinandro voalohany. Izany nanamarika ny lehibe indrindra varotra ny fanokafana ny 10 taona, Swift lasa ny vehivavy voalohany ny roa herinandro Albums amin'ny fanokafana varotra mahery 1 tapitrisa. Tamin'ny volana May, 2013 dia nivarotra tapitrisa kopy maneran-tany tamin'ny alalan'ny 6. Tamin'ny novambra, 2012 dia nivarotra alemana tapitrisa nandritra ny asany 26 ary manana 75 tapitrisa an-telefaona mihira.
Red fitsidihana any Amerika Avaratra nanana 66 13 teny anisan'izany ny kianja sy ny fandaharana nihazakazaka avy Martsa 2013 - 2013 tarafin'ny hazavana. Nitsidika Tour tamin'ny Desambra 2013 kianja manodidina New Zealand sy Aostralia tamin'ny volana Febroary 2014 Angletera sy Alemaina, ny fitetezam-paritra enina nifarana tamin'ny daty any Asia. Misy fampisehoana manasa manokana vahiny toy ny Carly Simon, Tegan sy Sara, Jennifa Lopez, Lioka Bryan, Patrick fototr'i Fall avy Boy, Ellie Goulding, Nelly, Lara Bareilly, Cher Lloyd, BoB, Gary Lightbody, Train, Neon Trees, Rascal Flatts ary Hunter Hayes. Niara-niasa tamin'ny artista maro izy nandritra ny vanim-potoana. Miaraka Jack Antonoff nanoratra ny hira "mamy noho ny Fiction" ho feonkira amin'ny horonantsary One Chance. Ny hira iray Nahazo fanendrena ho an'ny Best Original Song amin'ny 71. ny Globes Golden. Tamin'ny CMA Awards 2013 nanao ny Acoustic dikan 'ny hira "Mena" amin'i Vince Gill sy Alison Kraus. Ao Chicago, dia nanao tamin'ny The Rolling Stones, tatỳ aoriana nilaza fa iray amin'ireo tsara indrindra ny mozika fotoana ny asany.
Album Tsy nandresy lahatra Grammy fa nomena sokajy efatra. Ilay hira "Isika mihitsy ve ny Fiezahana Miverina Together" dia atolotry tao 2013 noho ny rakitsoratry ny taona sy ny rakikira 'ny taona 2014 ho Album ny taona. Tahaka izany ihany koa, tsy nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny Country Music Association izy io. Na izany aza, Taylor Swift tany 22 vao avy nahazo loka tsy manam-paharoa Pinnacle ho "tsy manan-tsahala" zava-bitany sy ny fandraisana anjara amin'ny mozika firenena maneran-tany. Tany aloha, Grath Brook ihany no nahazo izany loka izany. Ny loka dia nampahafantatra Tim McGraw, finoana Hill, Keith Urban, Rascal Flatts, George ety sy Brad Paisley, Mick Jagger, Cary Simon, Julia Roberts, Reese Whitherspoon, Ethel Kennedy sy Justin Timberlake. The New York Times nandinika ny loka noho ny fitandremana Taylor Swift ao amin'ny karazana ny "toetra ny firenena mozika, ny famoronana maotera, ny ambasadaoro ho any amin'ny malalaka izao tontolo izao." New Yorker nanao hoe: "Izao angamba no fotoana Swift nanome veloma ny karazana izay nanampy azy mivantana ny fanapahana ny Pop. "in 2012 nahazo telo MTV Europe Music Awards, anisan'izany ny loka ho an'ny vehivavy tsara indrindra sy tsara indrindra Act velona. Ny hira "Fantatro aho Olana ianao" nahazo ny loka ho an'ny tsara indrindra Female Video. Amin'ny American Music Awards 2012 nahazo ny loka ho an'ny firenena tsara indrindra mpihira sy ny 2013 loka ho an'ny mpanakanto ny taona.
Mena vanim-potoana, ny tia ny fiainana lasa ny momba ny fanaraha-maso ny haino aman-jery mafy. Ny Village nanoratra hoe: "izy ny tanora, dia mety ho kontroverně mampivarahontsana, manome ny tenany ho ivon 'ny tantara, ary, mazava ho azy, izay miaraka be dia be ny olona malaza ao amin'ny somary fohy ny fotoana, nefa tsy izany no tena tsy fahita firy." Tamin'ny lanonana Golden Globes, Tina Fey sy mpanao hatsikana Amy Poehler nandrora teo amin'ny tia ny fiainana sy Nanoro hevitra ny hanalavitra ny zatovo ao amin'ny mpanatrika. Tamin'ny Vanity Fair profil tatỳ aoriana nangataka mba haneho zava-nitranga io: "Izaho tena tia azy, fantatrao, tahaka nivazivazy aho ho azy. Fa raha tianao ny sasany fanambarana lehibe, satria 2010 aho nandeha niaraka tamin'i roa monja ny olona. "Raha niresaka tamim-pankasitrahana Swift voalaza fanamarihana Madeline Albright:" any amin'ny helo dia toerana manokana ho an'ny vehivavy izay tsy manampy ny hafa ny vehivavy "
Fotoana fohy taorian'ny fisehoany tamin'ny The Rolling Stones tany ampiandohan'ny volana Jona, dia namoaka an'i Taylor Swift i 2013 rehefa nanomboka niasa tao amin'ny rakikira fahadimy izy. "Efa manomboka izany, fahatsapana hafahafa toy izany, ary rehefa manomboka izany, dia matetika no manaraka ny fihodinana. Tiako ny manoratra roa taona alohan'ny hamitana ilay rakikira vaovao, "Ny CIA Music Fest ao Nashville dia nanambara tao anatin'ny resadresaka hiannon ao ambadiky ny sehatra.Nanomboka teo, nitazona ny tsipiriany rehetra izy mandra-pahaizany farany nizara mpitari-dalana vitsy nanerana ny tambajotra sosialy tamin'ny volana Aogositra, ary avy eo dia nanambara ny daty sy ny ora amin'ny serivisy mivantana amin'ny Yahoo - 18. Aogositra.
13. Tamin'ny volana Aogositra, i Swift dia niseho tamin'ny fahitalavitra an'i Jimmy Fallon ary nilalao tao amin'ny dianyE.!, izay nilalaovan'i Natalie vavy; tao amin'ny resadresaka fampisehoana, dia nanandrana nanambara tamin'i Taylor Swift fampahalalam-baovao mivantana amin'ny alalan'ny Yahoo i Fallon.Roa andro taty aoriana dia tonga tao amin'ny sinema ilay horonan-tsary momba ny siansa momba ny siansampanome(Ny Mpanome) avy amin'i Phillip Noyce, toerana izay nitantaran'i Swift ny anjara asan'ny Rosemary.16. Aogositra, miaraka amin'ny Jaime King nanatevin-daharana ilay antsoina hoe. "Ice Bucket Challenge", Internet antso, izay manompo ho toy ny famoriam-bola ho an'ny fikarohana momba ny fitsaboana ny aretina ALS. Nanasa ny olona dia tompon'andraikitra ny ranon amin'ny siny ny ranomandry ny rano, ho amin'ny tsimoka sy mizara lahatsary manerana ny tambajotra sosialy, raha tsy fankatoavana dia tsy maintsy toy Sahia mandoa zato dolara izay mandeha any amin'ny fitantarana ny American Fikambanana ho an'ny ady atao ity aretina ity. Ny paging andian-dahatsoratra, anisan'izany Taylor Swift sy Jaime King, dia ataovy roa, saha, ary koa ny anjara.
Ao amin'ny 18. 2014 dia nanambara tamin'i Taylor Swift tamin'ny alalan'ny Yahoo Live Stream, nalefa avy any an-tampon'ny New York Empire State Building, antsipiriany momba ny album vaovao1989, izay nivoaka 27. Oktobra 2014. Navoakany ihany koa ny singa voalohany amin'ilay rakikira antsoina hoe "Shake It Off". Araka ny teniny manokana, ny album album 80 dia nahazo tsindrim-peo tamin'ny alàlan'ny rakikira. taona, ary io ihany koa no rakitsary voalohan'ny fanambarana ofisialy ny pop.Alahady 24. Tamin'ny volana Aogositra, ilay mpihira nihira voalohany nandritra ny gala MTV Video Music Awards 2014.Ny "Shake It Off" dia nipoitra voalohany tao amin'ny Billboard Hot 100 sy 4. Ny toerana misy ny Chart Singles Chart.Farany amin'ny mamatonalina amin'ny 14. Oktobradia nanambara ny iray hafa amin'ireo hiran'ilay rakikira vaovao antsoina hoe "Out of the Woods".
Iray amin'ireo fahatsiarovana mozika voalohany Taylor Swift mihira any am-piangonana, ny reny renibeny, Marjorie Finlay (teraka Moehlenkamp). Tamin'ny fahatanorany dia Finlay fahitalavitra mpanolotra ao Puerto Rice ka nanao opéra tao Thailand sy Singapore. Amin'ny maha-tena kely ankizy Taylor tia ny Soundtracks ny Disney sarimihetsika: "Ny ray aman-dreny no nahatsikaritra fa raha vao ny teny tonga, te hamorona ny ahy." Potzději ray aman-dreniny nampidirina mpanakanto toa an'i James Taylor, Simon & Garfunkel sy Deff Leppard. Tena velom-pankasitrahana izy noho ny matoky ny reniny, izay nanampy azy koa izy, rehefa manomana azy kilasy famelabelarana. Ny reniny lazaina ihany koa ny "Mahaliana ny soratra sy ny fitantarana." Mailaka tia namaky teny sy nanoratra tononkalo, ary indrindra fa asa feno fanoloran-tena Shel Silverstein sy ny Dr. Seuss. Ny toerana tena boky dia hamono ny Mockinbird.
Izy no nampidirina ny tany mozika, "ny vehivavy lehibe mpanakanto 90.let" tahaka Shania, finoana, The Dixie voronkely. Taylor dia mitondra ny feo sy ny famaritan'ny mozikan'ny firenena. Ny tsindry mozika lehibe indrindra teo amin'ny asany dia nofaritan'i Shania Twain. Ny lamin 'ny fahazazana faite Hill nanandrana mandika "Ny zavatra rehetra nataoko na nilaza, tao anatiny nisy." Nankafizinay koa toe-tsaina manohitra ny olona Dixie zana-borona sy ny schopnst milalao feon'ny anao manokana. Ny hirany "Cowboy Take Me Away" dia nianatra nianatra ny gitara voalohany.
Rehefa mahita firenena zokiolona mozika začacla mpanakanto toa an'i Patsy Cline, Loretta Lynn, Wynette sy Dolly Fammy Paron Parton.Věřila fa "tena tsara ohatra ho an'ny vehivavy rehetra mpamoron-kira." Pahefana olona hafa firenena nentim-paharazana dia ahitana Miranda Lambert, Dwight Yoakam, George Strait, Garth Brooks, Kenny Chesney, Reba McEntire, Alan Jackson, Martina McBridge, Leann Rimes, Tim McGraw, Brad Paisley, Ryan Adams, Patty Griffin, Lori McKenna sy Bon Iver.
Nisy vokany koa ny mpanakanto hafa avy ao amin'ny firenena. Raha mbola zatovo dia tiany i Hanson sy Britney Spears. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia manana "fifikirana tsy misy lalao" amin'ny Spears izy. Tamin'ny taona sekoly ambony mihaino fatorana toy ny Dashboard Confessional; Mianjerà Out Boy, The rehetra - Baiboly manda sy Jimmy hanina World. Tena mpankafy ihany koa ny vanim-potoana toy ny vehivavy songwriters Ingrid Clarkson, Michelle Sampana, Pink, Alanis Morissette, Ashlee Simpson, Kelly Clarkson, Tefe Dolson sy Avril Lavigne.
Taylor koa dia nijery akaiky ny hira miaraka amin'ny andian-tantara OC sy Chirurgové, miaraka amin'ny hira rehetra nalefany tao an-trano. Izy dia mpankafy hip hop: "Ny fomba fiainan'ny firenena dia firenena iray ary ny hip hop dia mifangaro." Ny fanentanam-panahy dia mamoaka avy amin'ny katalain'ireo mpanakanto veterana. Stevie Nicks dia nanoritsoritra azy ho "mahery fo izay nanentana ahy tamin'ny fomba maro". Misavorovoro amin'ny mpanakanto 60 izy. ohatra: The Shirelless, Doris Troy ary The Boy Boy.
Paul McCartney, Bruce Springsteen, Emily Harris, Kris Kristonfferson, ary Carly Simon no ohatra momba ny asany. "Izahay nitsambikina teo amin'ny fahafahana, fa mbola mitovy mpanakanto mandritra ny asa." McCartney ho toy ny mpikambana ao amin'ny The Beatles sy ny irery mpanakanto manao amin'ny Swift fahatsapana "toy ny hoe izy no niaro ny fo sy ny saina ... samy mpiangaly mozika afaka ihany no manonofy ny boky toy ny izany. "izy iderany Springsteen," izy no tena musically izany nandritra ny fotoana ela. "Rehefa Swift mozika mitombo mikatsaka ny mitovy ny fahafahana miditra ho Harris:" fa tsy ny laza, fa ny momba ny mozika. "momba Krisoffersonovi hoe:" fa iray monja ireo olona izay any an-tsaha io nandritra ny taona maro, saingy tsy afaka milaza fa avy amin'ireo efa lany andro. "mailaka dia fantatra amin'ny mora, fa toetra tena mahery.
Lyrical theme and style
The Guardian nandritra ny roa voalohany Albums, naneho hevitra hoe: "Ny foto-kevitra dia ny fantastically tsara eo amin'ny fiainana miaraka amin'ny zatovo nostalgic alahelo feo sy ny fomba." New York Magazine nilaza hoe: "Vitsy ny mpihira efa nanoratra toy izany mazava tsara noraisim-peo ny tanora. Nodimbiasany ihany ny mety ho avy amin'ny sixties Brian Wilson, ilay hany tena mpanoratra tanora talohan'ny tonga izy. "Izany koa ampitahaina amin'ny Janis Ian.
Ao amin'ny rakikirany faharoaTsy Nanan-tahotramipoitra ny sarim-boninkazo. Nandinika ny rohy "eo amin'ny zava-misy (ny fitiavana) sy ny angano (fitiavana)." Ny fahatelo, fahefatra sy fahadimy rakikira kokoa olon-dehibe natao ho fifandraisana. Ankoatra ny olon-tiany sy ny fitiavana fifanarahana amin'ny sasany ny hira eo amin'ny ray aman-dreny - zaza fifandraisana ( "The Best Andro", "Aza hitombo", "Ronan"), fisakaizana ( "Dimy ambin'ny folo", "mifoka rivotra", "22"), fahafoizako ( "The any ivelany "," ny toerana eto amin'izao tontolo izao, "" Nofatorana teo Rehefa miaraka amin-pitsikiana "," Midika hoe "), sy ny asa fanirian-daza (" Change "," ho ela velona. "" ny One Lucky ").
New Yorker hoy ny hirany "dia miovaova, manana fihetseham-po sasany mampiasa fitaovana arifomba ny hira ... dia velona indray ny fampitahorana tatỳ aoriana." Slate nanamarika fa ny fanorenana Swift hira dia "fahagagana ezaka voafehy Pop Fifanarahana. Vitsy ny mpamoron-kira no manao tsaratsara kokoa tetezana noho izy. "Ny Rolling Stones gazety nilaza fa" ho toy ny mpihira-mpamoron-kira manam-pahaizana, manana voajanahary fanomezana ho an'ny fanorenana ny andininy-AVERINA ISAN'ANDININY-tetezana. "The Guardian nanoratra hoe:" mandany be loatra ny fotoana nanoroka an-orana, Fahagagana izany tsy maintsy mamorona nepomokavé kiraro. "Journal ao amin'ny American Songwritter Swift milaza hoe" lehibe mpamoron-kira, izay manoratra amin'ny tsy manan- tsahala ary efa voajanahary fahitana ... na dia ny zokiny indrindra ara-nofo dia miavaka amin'ny maha voahevitra, manana mazava safidy ny teny amin'ny iniana melodic rafitra. Tsy hahita rhyme malemy na tsy misy dikany ianao. "
Ao amin'ny asany dia ampiasainy ny antsipirian'ny fiainany. Rehefa mihaino mozika toy ny zaza, dia nahatsiaro ho sahiran-tsaina: "Tsy azoko, raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany manokana ny mpihira sy ny tsy hiresaka ny mozika." New York Times dia mino "fa ny raison d'être ny Miss Swift no fanitsiana fahadisoana." Tamin'ny Ireo hira dia matetika mifandray amin'ny fitiavana tsy fantatra anarana amin'ny taona fianarany amin'ny lisea, ary farany, fa tsy ny kely indrindra, amin'ireo mpiara-miasa aminy manokana. Ny John Mayer dia tokony hiantso ny hira "Dear John". Ity hira ity dia nampietry azy. Ny Village Voice momba an'io lafiny amin'ny ny asany ", ao hira milaza izay ananany ao an-tsainy, dia toy ny manana ny naniry mpampianatra, ary izany dia atahorana ny tsy fankatoavana ny talenta, izay tsy confessional, fa ny tantara." Maro ny haino aman-jery mino fa haino aman-jery fanaraha-maso ny Ny fanapahan-kevitra amin'ny fampiasana antsipirihan'ny autobiographical dia maloto fitondran-tena satria tsy nanontany ny mpiara-miasa aminy izy. Ilay mpihira dia nilaza fa tsy misy ny hira rehetra ary matetika mifototra amin'ny fanamarihana. Tsy vitan'ny hoe ny feon'ny miezaka ny hiresaka manokana momba ny zavatra na olona ao amin'ny hira, satria tena olona "miezaka ve ianao mba tsy hijery baraka na iza na iza."
Singa sy mozika
Ny mozikany dia ahitana singa pop, pop, pop-country and pop rock. Nosoratana ho mpanakanto any an-tanindrazany, izy dia manova avy ao amin'ny 1989 madio mankany pop. Nefa amin'ny hoavy dia maniry ny hanoratra tantara hafa an'ny firenena i Swif.
Group ny Rolling Stones milaza hoe "afaka hilalao amin'ny firenena gara, fa izany no iray amin'ireo vitsy tena vatolampy kintana isika izany andro izany nahazo." The New York Times-tsoratra: "avy any Miss Swift dia tsy be dia be ny mozika izay azo heverina ho an'ny firenena, indraindray milalao amin'ny Banjo, an-tsehatra indraindray Cowboy Manao baoty manana nanelatrelatra gitara, fa misy zavatra amin-javatra ao amin'ny Nashville unikátní- hatsarany ary tena marefo přednes.Swift dia heverina nentim-paharazana pop-tany tsy noho izy nanoratra ny tantara hira miaraka amin'ny endriky ny tononkira sy ny endrika mampihetsi-po, ary noho izany antony izany dia ilaina ao Nashville. "
Ny famaritana manokana ny mozika an'ny firenena "dia tena tsotra. Raha misy olona mihira ny fiainany momba ny fomba nitomboany tao amin'ny toeram-piompiana iray, dia lavo izy ary ny zanany dia nihalehibe tao amin'ny toeram-piompiana iray ihany. Ny olona sasany, rehefa malahelo izy ireo, dia mihira momba ny fomba hisotroan'izy ireo ao amin'ny baoritra whisky. Manoratra hira aho fa tsy afaka manatona ny fitsipiky ny fifandraisana ary mahavariana ny fitiavana. "
Ny feony dia faritana ho "mamy" fa malefaka. Manana fiantraikany tanteraka amin'ny saron-tava izy satria lasa mpihira ny mpanjaka, mihena amin'ny fomba mahazatra eo amin'ny sehatra izay miezaka hiteny mafy ny zazavavy saro-kenatra. Ny famoahana ny feony dia navotsotra sy navotsotra, saingy niova izy io, ankehitriny dia mitongilana izy io, ary matetika tafasaraka amin'ny interface izay mitondra ny olona ho adala. Nianatra ny teny tiany izy.
Ny feony mivantana dia tsara indrindra, fa tsy i Christina Aguilera na i Carrie Underwood. Ny hira henony dia nofaritana ho saro-kenatra, malefaka ary indraindray saro-kenatra. Na izany na tsy izany, dia nahazo fiderana i Swift noho izy tsy nety nanitsy ny feony.
Swift no mampiavaka fa ho toy ny mpamoron-kira, "Manoratra hira sy ny feoko dia fomba iray fotsiny mba hanehoana voalohany indrindra eran'ny." Ny mpitantana Scott Borchetta niaiky hoe tsy ny tsara indrindra mpihira ara-teknika. Ny fampisehoana ny hirany dia zavatra ifanaovana aminy, ary manao asa be dia be izy hanatsarana azy. Tao amin'ny 2010 dia nanambara izy fa hanohy hihira mandritra ny ora maro mihira.
Ny Swift dia mahatsiaro saina fotsiny amin'ny fampisehoana "raha tsy azony antoka izay heverin'ny mpijery mikasika azy, toy ny fanomezana loka."
Alaivo foana ny lobaka mena.
Olona mendri-piderana izay hanao tsara na inona na inona ny asany. Vogue Magazine ao amin'ny toetrany Voalaza fa "marani-tsaina sy mahatsikaiky ary indraindray downright ratsy fitondran-tena." Grantland nilaza fa "sucker" sy "natahotra ampahibemaso amin'ny fomba izay anao tsy hahita ao amin'ny firenena toy ny finoana andriambavy Hill na Carie Underwood. Toetra mitovy Diane Keaton tantaram-pitiavana hatsikana Annie Hall dia vonona amin'ny fotoana rehetra te hampifaly anao, matahotahotra, tsara fanahy loatra, feno hery.
Raha nanohana ny 1989, dia nanomboka nampiasa tambajotra sosialy i Swift mba hifandraisana mivantana amin'ny mpankafy, ary nanasa ireo mpankafy 100 hampiseho ny horonan-tsary Shake It Off. Nandefa Hafatry ny Krismasy ho an'ny mpankafy mihitsy ny Swift ary nanasa azy ireo hody any aminy, toerana niarahany niarahany. Nilaza izy fa manana ny "fifandraisana lava sy tsara indrindra izay efa nananany" niaraka tamin'ireo mpankafy azy izy, ary manondro azy ireo amin'ny fankalazana ny lokan'ny fankalazana. Fantatra fa matetika izy no mahita mpankafy ny tambajotra sosialy. Izy sy ny mpankafy azy dia matetika mifandray amin'ny tambajotra sosialin'ny Instagram ary indrindra ny Tumblr - na dia mandritra ny lanonana fanamarinana aza.
Tany am-piandohan'ny taona ny asa fanaovan-tsonia amin'ny Swift miseho, izay nahitana ny fahavaratra sy ny Cowboy akanjo kiraro. Ity lamaody lamaody ity dia kopian'ny tanora mpankafy maro izay manatrika ny fampisehoana. Tamin'ny Gala hetsika ho fantatry ny "sparkly, beaded akanjo." Ny volo olioly dia mazava ho napodobovám mpankafy sy Swift nilaza hoe: "Tsarovy ny nitovy-bolo, satria te-ho tahaka ny olon-drehetra sy ny taovolo Ary izany rehetra izany manahaka. Mahafinaritra izany. "Ao amin'ny 2011 Vogue gazety nangataka mba hanapaka ny bangs eo amin'ny pejy ny gazety. Ao 2014 aoka hanapaka ny volony fohy ary ankehitriny dia manao ny volo matetika straightened. Ao amin'ny 2011, Vogue dia nantsoina hoe American Style. Izy no nantsoina vehivavy tsara indrindra ho an'ny 2014.
Hery sy fankasitrahana
Ny asa nataony dia nidera ny mpanakanto manana traikefa. Bill Withers dia nilaza hoe, "Mahira-tsaina izy, tahaka ny mpanoratra tononkalo, azoko ankasitrahana ny fahaizany. Mendrika ny zava-bitany rehetra izy. "Nolazalazain'i Neil Young ho" mpamorona "izy:" Tiako ny Taylor Swift. Tiako ny mihaino azy. Tiako ny mijery ny valiny amin'ny fanafihana rehetra. Tiako ny mamaritra ny tenako. "Stephen Skills dia manolo-tena ny fomba fanoratany:" Izany no ataonao rehefa mpanoratra mpamorona ianao ... mampitony ny fonao ianao ary manoratra izany avy eo. "
James Taylor, izay nilalao indroa tamin'ny Swift hoe: "fotsiny isika lavo tamin'ny maso, ny fanatrehany an-tsehatra lehibe." Elvis Costello dia nilaza hoe: "Heveriko fa tena mahaliana. Azonao jerena ao aminy dia natahorana hisy handroba ny fahononam-po, ary nahaliana aho. "Judy Collins manondro Swift ho ohatra ny ankehitriny kintana, izay manohy ny tsipika ny saina mpanakanto tsy miankina.
Mikasika an'i Swift Kristoffenon, hoy izy: "Tena gaga aho. Ho ahy, dia mahavariana ny fomba nanoratan'ny olona iray tanora be loatra hira. Na dia eo aza ny laharana manana mahagaga asa. "Janis Ian nilaza fa" mailaka niova ho an'ny tovovavy hiatrika ny mozika skládánáním hira sy mitendry gitara ... misy izany maha-azo itokiana. "Nicks mino Swift," hoy izy nanoratra hira toy ny Neil Diamon sy Elton John, izay mahatonga ny rehetra izao tontolo izao hihira. "
John Bon Jovi milaza azy io ho "Marina fa ao isaky ny tari-dalana, sy ny endrika endrika. Izy dia mpamoron-kira, mpihira sady tsara tarehy tovovavy. "Parton ny" tena gaga Swift, indrindra ny songwriting ... aho tena nampiaiky volana hlobkom ny hira, dia manana fananana izay maka ela. "Etheridge Hoy izy:" Tiako ny fanahy, ny herim-pony. Mihevitra aho fa izany dia gaga ny olona, ​​ary hisy ny fotoana lava be. "
Haingam-pandeha ihany koa ny nahazo dera avy songwriters ankehitriny. Mpanohana azy tany am-boalohany asany i John Mayer: "Afaka mihetsika izany amin'ny andro ho misy mozika vanim-potoana ary dia mbola ho voa." Miderà ihany koa ny nahazo dera avy Drake, Tegan sy Sara, Grimes, Kesha, Katy Perry, Kelly Clarkson sy Lady Gaga.
Ryan Adams dia nanoritsoritra izany ho anisan'ny "mpamoron-kira mahagaga hitako hatramin'izay. Nipetraka niaraka taminy tao anaty efitrano aho ary naheno ilay hira nosoratany teny an-toerana ary tena tsy mampino. Ambony madio izany. "Kathleen Hanna dia" tanteraka amin'ny Taylor Swift. Heveriko fa marani-tsaina faran'izay lyrics, ary faly aho fa manoratra ny mozika. "Shirley Manson hoe:" dia mimořídně talenta amin'ny fanoratana hira ... dia naka ny varavarana, ary nandeha nizotra alalan'izy ireo. Tokony hankalaza ny lanjany isika. Izany no mpanakanto no tokony hatao. "Lena Duhman kintan'ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra HBO Girls, Swift Nilaza ho" fanahy kanto vadiny. "
Nanohana ny alaham-boliny voalohany izy, niseho ho modely ho an'ny jeans sy ny endrik'ilay fanentanana "Mobile Music" Verizon Wireless. Tao anatin'ny fotoana tsy nanan-tahotra, nanangana akanjo maotina tao Wal - Mart izy ary nanamboatra saribakoly sy saribakoly Jakks Pacific. Nanjary mpanohana ny ekipa Nashville Predators izy ary miatrika ny Sony Cyber ​​- digital cameras. Nanao lahatsary tao amin'ny Band Hero izy. Nandritra ny vanim-potoana miteny Speak Now dia namoaka fanontana manokana tamin'ny alàlan'ny Target izy. Nanjary endrika CoverGirl izy ary namoaka ny zava-manitra Elizabeth Arden, Wonderstruck ary Wonderstruck Enchanted.
Raha nanohana ilay rakikira fahefatra Red, dia nanolotra rakikira manokana miaraka amin'i Target, Papa John's Pizza sy Walgreens ny Swift. Nanjary lasa Crock Diet and Keds Shoes izy. Navoakan'i Taylor Swift ny ranomanitra fahatelo, Elizabeth Arden. Nanohy niasa tamin'ny Sony Electroncs sy American Greeting izy. Nandritra ny diany mena dia niara-niasa tamin'ireo orinasa maromaro izy, toa an'i Air Asia sy Qantas, izay nanao ny fiaramanidina ofisialin'ny Aostraliana sy Aziatika, raha i Cornetto kosa nanohana ny ampahany Aziatika tamin'ny diany. Ny album 1989 dia tohanan'ny Subway, Keds. Target of Coke. Navoakan'i 2014 ny zava-mahadomelina fahefatra mampiavaka azy.
Swift nanana ny hanao zavatra bitany tany amin'ny fizarana ny CSI 2009 any Las Vegas, izay nilalao ny mpikomy izy ankizivavy. The New Times Yorl nanamarika fa nandao ny tarehimarika Swift mba ho "kely maditra sy azo itokisana." Tatỳ aoriana amin'ity taona ity, Swift nampiantrano ary nanao toy ny mozika vahiny ao anatin'ny tantara ny Asabotsy Live Night. Entertaiment Weekly nilaza fa ny "SNL ity vanim-potoana, ny miaramila tsara indrindra" io dia "Mahavariana afaka isan-karazany ny anjara asa."
Ny voalohany voalohany voalohany tao amin'ny horonantsary dia ny sarimihetsika "On St. Andron'ny mpifankatia. Comedy, toerana izay nilalao sipa mpilalao tao amin'ny atleta ambony iray. Print fizahana ankapobeny ny fampisehoana dia tsara, The Los Angeles Times: "tena hery anaty tantara an-tsary", San Francisco Chronicle: "tena mampihomehy" Time "fa mahafatifaty," Daily News "fanaintainana hafahafa." Ao amin'ny 2012, Swift nanao an'i Aundrey ao amin'ny sarimihetsika The Lorax. Tao amin'ny 2013 dia nanao seho fohy tao amin'ny Komitin'ny New Girl izy. 2014 dia nandray anjara mavitrika tamin'ny sarimihetsika Doncer.
Ny ezaka fampandrosoana haingam-pandeha dia nomena voninahitra tamin'ny fikambanana "Do Something", The Giving Back and Tennessee Disaster Services. Michelle Obama Ao 2012 nanolotra Swift ny Big Help loka ny loka noho ny "fanoloran-tenany ho fanampiana ny hafa" sy "amin'ny alalan'ny insirovat ny asan'ny hafa". Tamin'ny taona io ihany, Kerry Kennedy, ny Robert F. Kennedy Center for Justice sy ny Human Rights, nanolotra Swift ny Ripple ny Fanantenana Award noho ny "fanoloran-tenany hanampy amin'ny fahatanorana toy izany ... Taylor no karazana vehivavy te hanana vavy."
Swift dia mpanohana ny fanabeazana ara-kanto. Nanome sekoly 2010 75 $ nashville ho an'i Hendersonville i 000 mba hanampy amin'ny famerenana hanamboatra ny fitaovana fanamoriana sy feo ho an'ny efitranon'ny sekoly. Ao amin'ny 2012, 4 dia nampanantena vola an-tapitrisa dolara mba handoavana ny fananganana foibe fanabeazana vaovao ao amin'ny Hall Music Hall of Fame sy ny tranom-bakoka ao Nashville. Manangana amin'ny 7 500 m2misokatra amin'ny 2014 ary hanohana programa vaovao sy atrikasa ho an'ireo zatovo sy zokiolona. Ny faritra dia ahitana sokajy telo sy toerana ary trano fampirantiana misy hetsika fanentanana toy ny zaridainan'ny ankizy sy toeram-pianarana izay ahafahana mijery ny sarimihetsika fampisehoana sy ny tetikasan-kanto hafa. Nantsoin'ny manam-pahefana tao amin'ny tranokalan'ny Taylor Swift Training Center ny mpihira ary nandray anjara tamin'ny filankevitra ilay mpihira. Ao amin'ny 2012 Swift miara-miasa amin'ny hofan-trano sy ny boky Chegga donates $ 60 000 6 ho an'ny mozika ampahany amin'ny oniversite Amerikana. Ny 2013 Swift dia manome ny 100 000 $ nashville symphony.
Swift manohana ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Ao amin'ny 2009 250 000 dia nanome $ isan-karazany manerana ny firenena sekoly izay nanatrika na nimy na dia nanana fifandraisana hafa. Ny vola dia nampiasaina mba hividy boky, fandaharanasa fanabeazana ara-bola ary nanampy ny mpampianatra karama. Ao amin'ny 2010 nanao tao amin'ny fampitàna mivantana, izay hanakona ihany no ho an'ny sekoly any Etazonia fanentanana mba hankalaza pianarana Vakio isan'andro. Ao amin'ny 2011 6 000 Swift Nanome boky fianarana Public Library Reading Library in Pennsylvania. Ao amin'ny boky 2012 14 000 fanomezana ho an'ny trano famakiam-boky Nashville Tennessee Public Library in. Ny ankamaroan'ny boky dia voasokajy ho hivezivezy, ny sasany dia natao ho an'ny ankizy avy amin'ny fianakaviana kely fidiram-bola, akanin-jaza sy ny akanin-jaza. Ao amin'ny 2012 co-nitarika ny fanentanana Amerika Across ary amporisiho ny ankizy mba hamaky. Ao amin'ny 2012 Swift mampirisika mamaky ao amin'ny faharoa webcast velona "herin 'ny famakian-teny" nalefa mivantana ny fotoam-pianarana any Etazonia. Ao amin'ny boky 2013 2 000 nanome ny alalan 'ny fandraisana an-tanana ny fandaharana The hanolo-tanana tany am-boalohany mamaky teny sy manoratra eo amin'ny fahaiza-manao Reading Hospital Child Health taona Center.V 2014 niseho mena fampielezan-kevitra, ary nandray anjara tamin'ny webcast pianarana hafa, mivantana any an kilasy ao amin'ny United States. Ao amin'ny 2014 dia nanome manontolo dia avy amin'ny hira "Tongasoa eto amin'ny New York" New York City sekolim-panjakana.
Nandritra ny asany dia nanome vola i Swift mba hanampiana ireo tra-boina amin'ny loza voajanahary. Ao 2008, dia nanome ny dia avy amin'ny fivarotana ny entana ao amin'ny Firenena Music Festival ho Red kříže.Později loza tahirim-bola tamin'ity taona ity, nanome $ 100 000 Vokovoko Mena mba hanampiana ny tra-boina any Iowa 2008 taona. 2009 dia nanohana ny antso an-tariby Victorian rehefa nanatevin-daharana ny fampisehoana tao amin'ny Sydney Relief Concert. Ny tombontsoa ara-bola dia heverina ho ambony indrindra amin'ireo artista nomena ny Aostraliana Mena. Ao 2012 Nanatrika ny Fanantenana ho an'ny Haiti telethon, izay nanasongadina ny antso an-telefaonina namaly mpijery izay te hanome vola. Swift koa dia nanoratra hira iray tao amin'ny rakikiran'ny Hope ho an'i Haiti. Ho valin'ny amin'ny May mendrika ny 2010 tany Tennessee, dia nanome $ 500 000 ny antso an-tariby nandritra ny tafa sy dinika tamin'ny WSMV. Taty aoriana tamin'ny taona 2010 100 000 nanome $ tao an-tsaha in Hendersonville, izay simba ny tondra-drano. Rehetra 2011 750 nanome vola ny $ 000 fampisehoana farany Mitenena Ankehitriny, ny tra-boina ny rambondanitra vao haingana tany Etazonia. Nanolotra fanomezana 250000 $ ho fiantohana iray izy, mpanazatra baolina kitra any Alabama, Nicks Kids mba hanampy hanamboatra ny fahavoazana amin'ny tornado.
Manohitra ny fanavakavahana LGBT i Swift. Taorian'ny famonoana an'i Larry King tao amin'ny 2008, ny tambajotra fanabeazan'ny PSA dia noraisina tamin'ny ady amin'ny heloka bevava fankahalana. Tamin'ny voalohany tsingerintaona maty i Larry Kig Swift dia nilaza tamin'ny gazety Fahafito Ambin'ny Folo, ny ray aman-dreniny dia nampianatra ny "tsy hitsara ny hafa araka izay tiany, inona firazanany, na inona ny fivavahany." In 2011 ny lahatsarin-kira ho an'ny hira "midika hoe" nataonareo tamin'ny fampijaliana in faharoa sekoly. Navoaka indray ny lahatsary ho an'ny loka MTV VMA ho an'ny hetsika ara-tsosialy. The New York Times dia nanoratra fa nino Swift, izay anisan'ny "onja vaovao ny zatovovavy, manome vaovao ho an'ny taranaka feo ny pelaka mpankafy nanorim-ponenana ny maha tamin'ny fotoana mampisafotofoto ny hafatra ny kolontsaina ankehitriny."
Ilay mpihira dia miasa amin'ny fikambanana mpanao asa soa marobe izay manome asa ho an'ny ankizy marary. Nomen'i 2008 hosodoko mena ny Chevy Victoire ho an'ny Camp Victory Junction Gang, kamiao iray nampiasaina hitondra ny ankizy avy eny amin'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny toby. 2011 nanome Swift, ho mpandresy ny mpanakanto amin'ny taona avy amin'ny Akademian'ny Mahaona Momba ny Firenena, 25 000 Dollars ho an'ny St. Louis Hospital. Fikarohana Jude any Tennessee. Io vola io dia niverimberina niaraka tamin'ny Akademia. 2012 dia nandray anjara tamin'ny Stand Up to Cancer, izay niarahany tamin'ilay hira "Ronan" ho fahatsiarovana ny zazalahy iray efa-taona izay maty noho ny homamiadana. Navoaka tamin'ny alàlan'ny finday ny hira ary ny vola rehetra dia nomena ho an'ny fikambanana mpanao asa soa mifandray amin'ny homamiadana. 2014 dia nanome vola 100 000 ho an'ny Fondation Cancer Research sy ny Hopitaly Children's 50 000 Dollar any Philadelphia. Swift dia mahita mpankafy marary amin'ny fanaovana Make-A -Wish Foundation. Izy koa dia manao fitsidihana manokana, ohatra, any amin'ny hopitalin'i St. Petersburg. Fikarohana momba ny fikarakarana zaza tsy ampy taona, ny Trano fitsaboana areti-mifindra, ny tranon'ny Ronald McDonald, ny Health Center Cedars-Sinai, ary ny hopitalin'ny ankizy - Foibe momba ny fahasalamana sy ny Hopitaly Children's Hospital.
Nampirisika ny tanora hanolo-tena amin'ny fiarahamonina ao an-toerana i Swift ho ampahan'ny Andro Eran-tanin'ny Tanora. Nametraka fanentanana i 2007 mba hiarovana ny ankizy amin'ny loza anaty aterineto miaraka amin'ny Tennessee Police Chiefs Association. 2007 dia nanohana ny fampielezan-kevitry Allstate izay mampiroborobo ny fiara fitondra-tena ho an'ny tanora. Tao amin'ny 2010 izy no nanao ny fampiratiana Got Milk? Maro ny zavatra nomena ho an'ny fikambanana maro, toy ny Fondation AIDS an'ny Elton John, Habitat for Humanity, MusiCares, ary Feeding America. Nanao fampisehoana tombontsoa maro koa izy.
Ny fiainan'ny tena manokana
Ho an'ny ray aman-dreniny, Swift nividy trano iray tany Belle Meade, Tennessee. Ny zandriny lahy, Austin, dia mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i Notre Dame ary manao asa an-dakilasy. Tamin'ny volana Desambra, voan'ny kanseran'ny reniny ny 2014.
Ny trano fonenan'i Swift dia tranobe ao Tribeca, New York. Mandany ny fotoany ao amin'ny trano telo ao Beverly Hills, Californie, ary ao amin'ny trano fatoriana iray ao Nashville. Manana trano amoron-dranomasina valo ao Rhode Island ihany koa izy.
Araka ny lisitra Celebrity 100 namoaka isan-taona, May ny gazety Forbes ho malaky 2009 dia nahazo $ 18 tapitrisa in 2010 $ 45 tapitrisa in 2011 $ 45 tapitrisa in 2012 $ 57 tapitrisa in 2013 $ 55 tapitrisa sy ny taona 2014 $ 64 tapitrisa.
Nandeha niaraka tamin'ny mpihira Joe Jonas i Swift tamin'ny Jolay ka hatramin'ny Oktobra 2008, mpilalao horonantsary Taylor Lautner tamin'ny Oktobra ka hatramin'ny Desambra 2009. Mifandray am-pihetseham-po amin'ny mozika John Mayer hatramin'ny faran'ny 2009 hatramin'ny fiandohan'ny 2010. Niaraka tamin'ny mpilalao horonantsary Jak Gyllenhall izy tamin'ny Oktobra hatramin'ny Desambra 2010, taorian'ny nahitàna ny fizarana azy tamin'ny Janoary sy febroary 2011. Ny Jolay hatramin'ny Septambra 2012 dia nandeha niaraka tamin'ny mpandova ara-politika an'i Connor Kennedy, ary nanomboka tamin'ny Oktobra ka hatramin'ny Janoary 2013 dia nandeha nankany amin'ny mpihira Harry Styles.
Ao amin'ny 2013 sy 2014 Swift, tsy handeha amin'ny olona izy amin'ny tsy firaharahiana hitodika amin'ny media sosialy hafa. "Manana fahatsapana fa raha nosokafako ny saina ny fitiavana, dia tsy ho tsara ho an'ny mozika asa." Misy be dia nitatitra fa nanomboka niaraka Swift ny mpamoron-kira sy mozika mpamokatra avy any 6 Calvin Harris. March 2015.
Nandritra ny fampielezan-kevitra filoham-pirenena ao 2008, Swift Vehivavy zava-dehibe rehetra nanohana fanentanana mikendry ny vehivavy ny fandraisana anjara amin'ny dingana ara-politika, ary dia iray amin'ireo kintana maro izay nanoratra hafatra ho an'ny daholobe ho amin'ny fampielezan-kevitra ho an 'ny Firenena. Hoy izy hoe: "Tsy mieritreritra aho hoe ny asako dia ny miezaka ny mitaona ny olona ny tokony hifidianana azy." Taorian'ny nanokanana azy[loharanom-baovao?]Niteny tamin'i Rolling Stone ny filoha Obama fa nanohana ny filoha izy: "Tsy mbola nahita an'ity firenena ity velively aho momba ny fanapahan-kevitra politika. Faly aho fa ity no safidy voalohany nataoko. "
Tao amin'ny 2010, ny Filoha Amerikana George HW Bush dia nanatrika ny fahitalavitra iray tao Kennebunkport, Maine, izay nahitana ny Swift ihany koa. Nolazainy tatỳ aoriana fa "malaina" i Swift ary tena tsara fanahy. Ao amin'ny 2012 i Swift nomena ny Kids safidy fankasitrahana azy asa soa teo an-tanan'ny Michelle Obama, izay namaritra azy io toy ny olona iray izay "nitsangana teo an-tampon 'ny mozika, fa mbola nidina tetỳ an-tany, olona izay ny nampoiziny, izay Afaka tonga i 22letý. "Ny vehivavy voalohany dia namaritra an'i Swift ho" modely ". Ao amin'ny 2012 Swift nandritra ny tafatafa fa na dia miezaka foana ny tenako "iray nahita fianarana, ary nampahafantarina araka izay azo atao," Hiteny tahaka izany "momba ny politika, satria mety hisy vokany eo ny olona." Niresaka momba ny liana tamin'ny Amerikana sy ny famakiana boky tantara momba an'i Abrahama Lincoln, John Adams, Rain'ny Rain'ny Nosy sy Ellis. Nandany fotoana niaraka tamin'ny fianakavian'i Kennedy i Swift ary niresaka momba ny fiderany an'i Ethel Kennedy.
Loka sy voninahitra
Swift efa nahazo loka maro sy ny voninahitra, izay ahitana 10 Grammys, American Music Awards 16, 11 vidin-javatra Firenena Music Association, 8 vidin'ny Music Academy ny Firenena, takelaka Music Awards 34 sy 1 Brit Award. Amin'ny maha mpamoron-kira azy dia nomem-boninahitra nataon'ny Nashville Songwriters Association sy ny Songwriters Hall of Fame.
Tany am-piandohan'ny 2015 Swift dia namoina alemàna 40 tapitrisa sy 130 tapitrisa tapitrisa ary iray amin'ireo artista dizitaly 5 manerantany. Ny tsirairay amin'ireo rakitsary Studio 5 navoakan'i Swift dia namidiny tamin'ny tapitrisa 4 tapitrisa tany Etazonia:Taylor Swift(5,5 mil),Tsy Nanan-tahotra(6,9 mil),Mitenena ankehitriny(4,5 mil),Red(4,1 mil) ary1989(4 mil)
Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny Discography Taylor Swift.
Ny feon-kiran'ilay seho: Ny Collection Taylor Taylor(2007)
Hampiditra ny kitapo
iTunes mivantana avy ao SoHo
Miresaka izao: Live World Live
CMT Crossroads: Taylor Swift & Def Leppard(2008)
Soundtracks amin'ny filma[
Hanoanana: Taylor Swift & Ady An-trano - Azo antoka sy mazava(2011)
Hanoanana: Taylor Swift - Maso Misokatra(2011)
Fifty Dark Shades: Taylor Swift feat Zayn - Tsy Te ho Aina Mandrakizay Aho (2017)
2009 Jonas Brothers: Ny 3D Koncert Self alone Rohy kely
Ny Las Vegas Las Vegas Haley Jones "Hiverenany, Hiverenany, Hiverenany"
Hannah Montana: The Movie Self alone Rohy kely
Sabotsy alina mivelona Self alone Loop / Music Guest
2010 Tamin'ny andron'ny mpifankatia Felicia Ny laharana voalohany tamin'ny sarimihetsika
2012 Dr. Seuss 'The Lorax Audrey Ity mpilalao Taylor ity dia niteny
2014 Ny Mpanome Rosemary Pejy misy rohy
1: Sarimihetsika Taylor Swift
2: Fearless (album, Taylor Swift)
3: 1989 (album, Taylor Swift)
4: Red (album, Taylor Swift)
5: Taylor Swift (Album)
9: Manomboka amin'ny Desambra
13: Album tsy fantatra
14: Lazao ankehitriny
15: Loka Music Music Awards 2015
16: Sarimihetsika Music Bill
17: Tsy matahotra
19: Vehivavy tsy manambady (mametraka tononkalo eo amboniny)
20: Fampisehoana An-tsitrapo An-jatony 2012
21: Loka Amerikana Music Awards 2015
25: Fampisehoana An-tsitrapo An-jatony 2011
27: 25. Ireo loka miavaka amin'ny Nickelodeon Kids
28: Loka Music Music Awards 2016
30: Repoblika Repoblika
31: 26. Ireo loka miavaka amin'ny Nickelodeon Kids
33: Fampisehoana An-tsitrapo An-jatony 2013
34: 23. Ireo loka miavaka amin'ny Nickelodeon Kids
37: 24. Ireo loka miavaka amin'ny Nickelodeon Kids
41: Joey Mpanjaka
43: 39. ročník ny safidin'ny safidin'ny olona
44: Fanantenana ho an'i Haiti Ankehitriny
47: Lohatenin'ny mpihira
48: Dimy alokaloka maizina (sarimihetsika)
Taylor Alison Swift (* 13 Desambra 1989) dia mpihira Amerikana, mpamoron-kira ary mpamoron-kira. Nihalehibe tao Wyomissing, Pennsylvanie izy ary nifindra tany Nashville, Tennessee, izay nanombohany ny asany amin'ny maha-mpihira popana azy. Nanao sonia fifanarahana tamin'ny labiera tsy miankina Big Machine Records izy ary lasa mpamorona hira farany indrindra ho an'ny mpilalao Sony / ATV Music Publishing. Vantany vao navotsotra ny rakikirany voalohany (Taylor Swift) tao 2006, dia lasa kintan'ny mozikan'ny firenena izy. Ny mpitovo fahatelo, "Our Song", dia nanao azy ho mpihira faran'izay kely indrindra hanoratra hira tsy misy fanampiana ary namoaka hira iray izay nihazakazaka voalohany tao amin'ny Billboard Hot Country Songs. Nahazo nomination Grammy Award izy ho an'ny Artist Best New ao amin'ny 2008.
Izany no Discography ny mpihira Amerikana Taylor taona Swift.Do 2013 26 eran-nivarotra mihoatra ny Albums tapitrisa. Ao Etazonia, nivarotra 22 tapitrisa Albums ary voarakitra 51,1 tapitrisa nomerika varotra ny Albums sy písní.AlbaStudiová albaKoncertní albaExtended playVideo alba2009: CMT Crossroads: Taylor Swift sy def Leppard2011: Taylor Swift: Journey ho FearlessSinglySolo singlyDuetyPropagační singlyDalší hira hitparádáchPísně izay apetraka ao amin'ny filaharana takelaka Hot 100, nefa tsy singly.Fearless: "ny lalana nitiavako anareo" (72. fiarandalamby), "Mandrakizay & foana" (34.) "Hanketo dia lavo" (10.) "Untouchable" (19.) "Avia in ny orana "(30.)" Superstar "(26.)" ny ambadiky ny varavarana "(22.) Lazao amin'i" Ry Jaona "(54. fisarahana)" Aza hitombo "(84)." Enchanted "(75.)" tsara noho ny valifaty "(56)." Innocent "(27.)" fiantraikany "(63.)" Last Kiss "(71.)" ho ela velona "(85.)" Raha izany no Movie "(10.)" Superman "(26.) Mena:" Saika ve aho "(65.)" Tsara loatra rehetra "(80.)" Mijanòna Mijanòna Mijanòna "(91)." Ny fotoana I Fantatro '(64).
Tsy misy tahotra ny albumy Studio Amerikana mpihira Amerikana Taylor Swift. Navoaka i 11. November 2008 ao amin'ny Big Machine Records. Ny raki-kira nanaovan'ireo ny US takelaka 200, 592 304 nivarotra gazety amin'ny herinandro voalohany ary lasa be mpividy indrindra Album ny vehivavy mpihira ao 2008 herinandro voalohany. CD Tsy Nanan-tahotra toy ny voalohany afaka handresy ny tokonana 1 000 000 gazety namidy tao 2009, 1 500 000 avy 1 dika mitovy namidy. Janoary. Ny raki-kira efatra nanana Hits ao amin'ny Top 10 - "Change" (10.) "Love Story" (4.) "Tsy Nanan-tahotra" (9.) Ary "ho Anisan'ny amiko" (2.). Ny raki-kira koa Hits enina ao amin'ny Top 20, ho any amin'ny ambony niaraka "Tsy Miala tsiny ianao" (11.) Ary "White Horse" (13.). Ny tokana ofisialy no nanjary tratran'ny fahombiazan'i Swift, nankafy ny fahombiazan'ny fiarahamonina sy manerantany. Ny albumy dia nitazona ny iraika ambin'ny folo herinandro tao amin'ny Lisitry ny lisitry ny sarintany 200.
1989 no rakikira fahadimy nataon'ilay mpihira amerikanina antsoina hoe Taylor Swift navoakan'i 27. Oktobra 2014. Ity no sangisangy voalohany nalainy, nalaina tamin'ny ankapobeny tamin'ny mozika Pop tamin'ny valo tamin'ny taon-jato farany. Nofaranan'ilay rakikira ny fanovàna ny mpihira malaza ao amin'ny firenena, izay efa nanomboka tamin'ny sasantsasany tamin'ny hitsikera teo aloha "Red" ao amin'ny pop idol. Ny fiovan'ny fomba fanao dia nasongadin'ny singa voalohany amin'ny rakikira "Shake It Off", izay nampidirina miaraka rehefa namoaka ny momba ny rakitsarin'i 18. 2014, ary nifanindran-dalana tamin'ny herinandro ambony tao amin'ny tabilao navoakan'ny Billboard Hot 100.
Red dia ny sarimihetsika an-dahatsary faha-efatra an'ny mpihira Amerikana Taylor Swift. Ny rakikira dia voarakitra ao amin'ny Big Machine Records ary navoakan'ny 22. Oktobra 2012. Ny rakikira dia avy amin'ny singa "We Never Ever Getting Together Together" ary "Manomboka indray".
Taylor Swift dia ampahan-tsombon'ilay mpihira iny ihany. Navoakan'ny 24 ilay rakikira. Oktobra 2006.Seznam hira Tim McGraw - 3: 54Picture handoro - 2: 57Teardrops momba ny Guitar - 3: 37 Place eto amin'ity tontolo ity - 3: 24Cold araka izay - 4: 03The ivelan'ny - 3: 31Tied Rehefa miaraka amin-pitsikiana - 4: 13Stay Beautiful - 4: 00Mary ny Song (Oh My My My) - 4: 06Should've Said no - 3: 37Our Song - 3: 24Deluxe ediceTim McGraw - 3: 54Picture handoro - 2: 57Teardrops momba ny Guitar - 3: 37 Place eto amin'ity tontolo ity - 3: 24Cold araka izay - 4: 03The ivelan'ny - 3: 31Tied Rehefa miaraka amin-pitsikiana - 4: 13Stay Beautiful - 4: 00Mary ny Song (Oh My My My) - 4: 06Should've Said no - 3: 37Our Song - 3: 24I'm ihany aho, rehefa miaraka Anao aho - 3: 35Invisible - 3: 25 tanteraka Heart Tsara - 3: 42
Ny reputation no seho an-tsehatra tantara an-tsarin'ny mpihira amerikanina Taylor Swift. Navoaka tamin'ny 10. Novambra ny taona 2017. Navoakan'ny 23 ny famoahana ilay rakikira. Aogositra tamin'io taona io, rehefa navoaka ihany koa ny fonosana. Ity no rakikira voalohany hatramin'ny 2014, rehefa navotsotra ny 1989. Hatreto, ny alàlany dia miorina amin'ny fialan-tsasatra roa taona. Ed Sheeran sy ny hoavy rapper dia niseho tao amin'ny firaketana an-tsarin'i Taylor Swift.
Haingam-pandeha teny (amin'ny teny Anglisy dia midika hoe fifadian-kanina, Nimble, mailamailaka) Afaka manana dikany maro: People Swift - Baiboly mpiangaly rap sy ny mpikambana ao amin'ny D12David Swift (* 1933) - British herecJonathan Swift (1667-1745) - irlandey spisovatelLewis A. Swift (1820-1913 ) - American astronomEdward D. Swift (* 1871) - Baiboly astronoma, zanak'i LA SwiftaTodd Swift (* 1966) - Canadian básníkTaylor Swift - American zpěvačkaDalší mampiasa SWIFT - ny fiaraha-monina ho an'ny maneran-tany interbank ara-bola komunikaciSwift (vava volkano tamin'ny Deimos) Swift (vava volkano ny volana) haingam-pandeha (fandaharana teny) - fandaharana teny mivelatra ny AppleSWIFT (projection rafitra) - ny rafitra-baovao sy ny dokam-barotra projection ao Metro-pifidianana ho ny lalana manohitra ny sehatra, nofoanana tamin'ny Janoary 2008Swift (tranonkala navigateur) - tranonkala navigateur ho an'ny Windows-monina WebKituSuzuki Swift - karazana manokana Fanaovana fiaramanidina fiara - Hetsika miaramila nandritra ny ady tao V ietnamuSupermarine Swift - British fiaramanidina mpiady 50 tapany voalohany. flight 20. taonjato
"Ny ahy" dia hira iray nataon-dry Taylor Swift, mpanoratra mpihira Amerikana-pop. Ny hira dia avy amin'ny alàlan'ny lahatsorany faharoa studio Speak Now. Ny famokarana dia i Nathan Chapman sy Taylor Swift.
"Back to December" dia hira iray nataon-dry Taylor Swift, mpihira amerikanina mpihira. Ny hira dia avy amin'ny alàlan'ny lahatsorany faharoa studio Speak Now. Ny famokarana dia i Nathan Chapman sy Taylor Swift.
MTV EMA 2012 (fantatra amin'ny anarana hoe MTV Europe Music Awards) dia nitazona 11. Ny Novambra 2012 tany Frankfurt, Alemana, ary ny mpanohana ny hariva dia Heidi Klum. Izany no fahadimy niorenan'ny EMA tany Alemana ary fanindroany ny Frankfurt no mpiantrano. Ao amin'ny 17. September 2012, navoaka ny fanendrena. Nahazo nomination enina i Rihanna, ary nahazo vatsy dimy i Taylor Swift.
Taylor Lautner (* 11. 1992 Febroary, Grand Rapids, Michigan, United States) dia mpilalao sarimihetsika Amerikana izay tena malaza ny anjara asan'ny Jacob Black ao amin'ny sarimihetsika andian-dahatsoratra Stmívání.Osobní životNarodil Debora sy Daniel Lautnerovým. Rehefa taona 6 izy dia nanomboka nanolo-tena ho karate. Efa tao amin'ny 8 izy no naneho ny fireneny ary nahazo medaly volamena telo. Karate dia nianatra karate tao amin'ny sekolin'i Fabian. Avy eo dia nampiofana azy i Mike Chat.
Max Martin, teraka anarana Martin Karl Sandberg (* 26. 1971 Febroary, Stockholm) dia soedoà mpanoratra ny mozika malaza, mpamokatra mozika sy ny mpihira. Nanoratra Hits ho an'ny Backstreet Boys (Tiako izany), Britney Spears (... Baby One More Time), Bon Jovi (izany ny Fiainako), Katy Perry (I nanoroka ny Girl), Avril Lavigne (Inona ny helo, mitsikia, Wish Eto ianao), Pink (Ka inona) Maroon 5 (One More Night), Taylor Swift (isika mihitsy ve ny Miara-Hanao Back, Ahintsano Ilay Izy, Blank Space, Ratsy Ra), Westlife, Celine Dion, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, The Veronicas, Jennifer Lopez, Ellie Goulding, Adele na 'N Sync. Izy 22 hira ao amin'ny takelaka Hot 100. Ary nahazo telo Grammy Awards (2015 - Mpanao ny taona, 2016 - Pop Album tsara indrindra sy ny rakikira ny taona, ao amin'ny toe-javatra roa ny rakikira 1989 avy Taylor Swift).
Ny rakitra tsy misy dikany (misy rakikirin'ilay anarana) ihany koa dia rakikiran'ny mozika antsoina hoe ny anaran'ity vondrona ity na ny anaran'ilay mpihira. Matetika izy no voalohany (antsoina hoe debut) album. Ohatra iray amin'ny rakitra tsy fantatra izay tsy navoaka voalohany dia ny Genesis Genesis, ohatra; Izany no tao amin'ny tahirin-tsarimihetsika faharoa ambin'ny folo.
Lazao Izao ny albumy fahatelo amin'ny mpihira Amerikana sady mpilalao sarimihetsika Taylor Swift. Navoaka i 25. October 2010 an'ny Big Machine Records. Natao tamin'ny 2008 ho an'ny 2010 miaraka amin'i Swift sy Nathan Chapman ilay rakikira. Ny hira rehetra tao anaty rakikira dia nosoratan'ny mpihira fotsiny. Ny rakikira dia manasongadina ny pikantsary pop sy lyrical themes ho an'ny fitiavana, am-pitiavana ary fo torotoro. Ny albumy dia nentanin'ny fiainan'ilay mpihira, ny hira dia mamaritra ny traikefany.
Ny loka Xnumx Billboard Awards dia natao tao amin'ny 2015. May 17 ao amin'ny kianja Grand Garden MGM any Las Vegas. Navoakan'ny ABC ny lanonana. Ireo mpandray anjara dia nandray an'i Ludacris sy Chrissy Teigen.
Ny lokan'ny mozika Billbill dia loka nomen'ny gazetiboky Amerikana mozika amerikana. Ny vidiny dia navela tamin'ny 1989 ka hatramin'ny 2007. Avy eo indray dia nanomboka tamin'i 2011.ProcesNa Tsy toy ny Grammy vidin-javatra, izay mamaritra ny fanendrena araka ny isan'ny vato avy amin'ny National Academy nanoratra Zavakanto sy ny Siansa, no nanendry ny takelaka Music Awards dia mifototra amin'ny filaharana, alaina ary amin'ny ankapobeny playability eo amin'ny onjam-peo.
Tsy Nanan-tahotra mety ho: Tsy Nanan-tahotra (album, Taylor Swift) - Album ny mpihira Swift Taylor avy any 2008Fearless (album, Family) - Fianakaviana Album ny taona 1971Fearless Records - Baiboly Music Publishing
Burnin 'Up Tour no fifadian-kanina faha-Jona Jonas Brothers. Ity fitsangatsanganana ity dia tokony hanohana ny albumy Little Bit Longer. Ity fitsangatsanganana ity koa dia nanohana ny sarimihetsika Disney voalohany, Camp Rock, izay nalain'i Jonas Brothers. Ny fampisehoana koa dia nampiasaina hanohanana ny mozika Demi Lovato. Ny fitsidihana dia nanomboka tamin'ny 4. Jolay 2008. Ny sarimihetsika 3D antsoina hoe Jonas Brothers: Navoaka tamin'ny 3 ny andrana 27D. Febroary 2009. Navoaka ny rakitsary fampisehoana 24. Febroary 2009. Avril Lavigne, Demi Lovato, ny Veronicas, Robert Schwartzman tamin'ny antokon'ny miaramila Rooney sy ny firenena kintana Swift Taylor toy ny vahiny no nanao fitetezam-paritra ny mpanakanto amin'ny fotoana maro ary nanomboka Honor Society sy ho toy ny vahiny ao Puerto Rico 22. March 2009. Taylor Swift dia nilalao tamin'ny hira nataony hoe: "Tokony ho nitenenany hoe", toy ny filalaovana an'i Jonas Brothers. Ny totalin'ny total dia nandeha tamin'ny 41 tapitrisa dolara, ho an'ny fampisehoana 48.
Ny vehivavy tokan-tena (Fitiavana sy fametrahana azy io) dia hira nataon'ny mpihira Amerikana Beyoncé Knowles tao amin'ny rakikirany fahatelo, I Am ... Sasha Fierce. Navoakan'ny 12 ilay hira. October 2008 ho mpitovo mpanamory. Ny mpamorona dia nanomboka namorona hira taorian'ny fampakaram-bady miafin'i Beyoncé sy ny vadiny Jay-Z tamin'ny Aprily 2008. Ny mpamokatra dia nanentana ireo olan'ny olona tsy tia fanambadiana. Ilay mpihira tat~ aoriana dia nilaza Billboard fa tiany ny lohahevitry ny hira satria olana iray izay mamaha ny vehivavy maro isan'andro.
Fampisehoana ho an'ny sokajy tanora 2012 dia nomena tamin'ny 22. Jolay 2012 ary nandefa tao amin'ny fahitalavitra Fox TV. Ireo mpandray anjara tamin'ity taona ity dia nanjary Demi Lovato sy Kevin McHale. Ireo loka dia nankalaza ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny taon-dasa tamin'ny mozika, horonantsary, fahitalavitra, fanatanjahantena, lamaody, comédie ary Internet. Ny loka dia nofinidin'ny zatovolahy hatramin'ny faha-telo ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo. Tamin'ity taona ity dia voarakitra an-tsoratra tamin'ny vato 134 tapitrisa.
Ny loka Amerikana Music Music 2015 dia natao tao amin'ny 22. November 2015 tao amin'ny Microsoft Theatre ao Los Angeles, Californie. Navoakan'i ABC ity andian-dahatsoratra ity ary navoakan'i Jennifer Lopez.
Ny mozikan'ny firenena dia mozika amerikana, ny fiandohan'io dia miverina amin'ny faran'ny 18. taonjato. Ny 20 tamin'ireo taona 1920 dia ny laharana voalohany. taonjato. Nafana fo tamin'ny mozika tamin'ny mpifindra monina Espaniôla, Frantsay ary Irlandy izy.
Anarana sy atao hoe koa Taylor [tejlr] na Tylor manana toetra maro: Alan Taylor (1959) - Baiboly talen, mpamokatra sy scenáristaAngelo Taylor (1979) - Baiboly atleta, atleta, Olympic vítězArt Taylor (1929-1995) - Baiboly Jazz bubeníkBilly Taylor (1921-2010) - Baiboly Jazz mpitendry piano sy skladatelBrenda Taylor (přechýleně Brenda Taylor) - more osobCecil Taylor (1929) - Baiboly mpitendry piano sy skladatelCreed Taylor (1929) - Baiboly ny mozika producentDallas Taylor (1948-2014) - US hudebníkDon Taylor (1920 -1928) - Baiboly sarimihetsika režisérBrian Shaw-Taylor (1915-1999) - irlandey fiara závodníkBrook Taylor (1685-1731) - mpahay matematika anglisy sy vědecCorey Taylor (1973) - American mpihira sy hudebníkDallas Taylor (1948) - US bubeníkDave Taylor (1955) - Canadian matoanteny útočníkEdward Burnett Tylor (1832-1917) - British ara-kolontsaina ANTR opologElizabeth Taylor (1932-2011) - American herečkaFrederick Winslow Taylor (1856-1915) - milina inženýrGene Taylor (1952) - US pianistaHenry Taylor (1885-1951) - British mpilomano, Olaimpika vítězHound Dog Taylor (1915-1975) - Baiboly BLUES mpitendry gitara ary zpěvákCharles Taylor (filozofa) (1931) - Canadian politika filosofCharles Taylor (mpanao politika) (1948) - filoha teo aloha LibérieChip Taylor (1940) - American mpihira sy hudebníkChris Taylor - more osobChristian Taylor (1990) - Baiboly atleta, trojskokanJames Taylor (* 1948 ) - American mpihira sy kytaristaJennifer Bini Taylor (* 1972) - American herečkaJoseph Hooton Taylor (* 1941) - US radioastronomJoseph Lyle Taylor (* 1964) - US herecKarl Taylor Compton (1887-1954) - US fyzikKathrine Kressmann Taylor (1903-1996) - American spisovatelkaKenneth Taylor (1917-2005) - Baiboly sy ny teolojianina spisovatelKoko Taylor (XN UMX-1928) - American zpěvačkaLarry Taylor (* 2009) - Baiboly bassist rahalahy Mel TayloraLili Taylor (* 1942) - American herečkaMargaret Taylor (1967-1788) - vadin'ny Filoha Zachary TayloraMel Taylor (1852-1933) - Baiboly mpiangaly mozika, rahalahin'i Larry TayloraMeshach Taylor (1996-1947) - US herecMick Taylor (* 2014) - anglisy hudebníkMike Taylor (paleontologist) (1949) - British solosaina programa sy paleontologMorgan Taylor (1968-1903) - Baiboly atleta, Olympic vítězOtis Taylor (* 1975) - Baiboly BLUES mozika
Red na Red mety milaza Mena (renirano) - mena řekaRED - Random Early Detection - kisendrasendra voalohany detekceRed (labiera) - Litoanianina pivoFilmyRed (sarimihetsika 1970) - horonantsary avy any 1970 (Gilles Carle) Red (sarimihetsika 2002) - horonantsary taona 2002 (Ram Sathya) Red (film, 2008) - sarimihetsika ny taona 2008 (Trygve Allister Diesen sy Lucky McKee) Red (film, 2010) - sarimihetsika ny taona 2010 (Robert Schwentke) HudbaRed (album, King jaky) - mozika raki-kira British tarika CrimsonRed Mpanjaka (album, Taylor Swift) - mozika Album ny mpihira Taylor SwiftRed (tarika) - Baiboly ny mozika kristianina skupinaLiteraturaReD - Czech Avant tena manavao časopisExterní rohy
Fampisehoana ho an'ny sokajy tanora 2011 dia nomena tamin'ny 7. August 2011 ary mivantana dia mivelona amin'ny fahitalavitra Fox TV. Mpampianatra tamin'ity taona ity i Kaley Cuoco. Ity no fotoana voalohany navoakan'ny vidin'ny vidim-piainana nanomboka tamin'ny 2007.
Ryan Benjamin Tedder (* 26. 1979 Jona) dia Amerikana mpamoron-kira sy producent.Je fantatra amin'ny hoe fitarihana mpihira ny Amerikana Pop vatolampy tarika OneRepublic, koa dia niara-niasa tamin'ny maro mpanakanto toa an'i Madonna, U2, Adele, Beyoncé Knowles, Birdy, Maroon 5, Demi Lovato, Ellie Goulding, BoB, Ariana Grande, Kelly Clarkson, K'naan, Carrie Underwood, Jennifer Lopez, Jordin Sparks, Leona Lewis, Gavin DeGraw, Sebastian Ingrosso, Gym Class Heroes, Direction iray, James Blunt, Taylor Swift, Gwen Stefani, Far East Movement, Paul Oakenfold, ary Ella Henderson, Zedd, Selena Gomez, Alesso, David Guetta.
Ny loka miavaka nataon'i Nickelodeon Kids dia natao tao amin'ny 31. Diaben'ny 2012 tao amin'ny Centre Galen any Los Angeles. Nampiarahina tamin'i Will Smith ny lanonana. Nandritra ny hariva, ny mpihira Katy Perry sy One Direction dia natao.
Ny loka Xnumx Billboard Awards dia natao tao amin'ny 2016. May 22 ao amin'ny kianja T-Mobile any Las Vegas. Navoakan'ny ABC ny lanonana. Nandray an'i Ludacris sy Ciara ireo mpanatrika. Ny fanambarana dia nambara tamin'ny 2016. April 11. Ny herinandro dia nahazo ny ankamaroan'ny fanendrena sy ny 2016. Nahazo ny loka Millennium Billboard ny Britney Spears. I Celine Dion no nahazo ny loka Iconball Icon.
MTV EMA 2017 (fantatra amin'ny hoe MTV Europe Music Awards) dia natao tamin'ny 12. Novambra 2017 ao amin'ny Wembley Hall any London, UK. Nanome ny loka fahenina ny Fanjakana Royaume-Uni, ary faharoa tany Londres.
Repoblika Records dia orinasa mpamokatra mozika amerikana izay vondrona Mozika Universal. Ny label dia natsangan'i Monte Lipman sy Avery Lipman tao amin'ny 1995. Tao amin'ny 1999, dia lasa ampahany amin'ny GroupUniversal Motown Group ny labels. Taorian'ny namoahana ny Motown Records, dia nosakanana ny lisitry ny Repoblika Records nandritra ny fotoana fohy. Niverina tao amin'ny 2006 izy ho Records Universal Records ary tao amin'ny 2012 dia navitrika indray izy tamin'ny maha Repoblika Records azy.
Ny loka miavaka nataon'i Nickelodeon Kids dia natao tao amin'ny 23. Diaben'ny 2013 tao amin'ny Centre Galen any Los Angeles. Ny mpandrindra hariva dia mpilalao sarimihetsika Josh Duhamel. Rapper Pitbull dia natao tamin'ny mpihira Christina Aguilera sy Kesha nandritra ny takariva. Ny fifidianana amin'ny aterineto dia nanomboka tamin'ny 14. Febroary 2013.
John Krovoza dia cellist Amerikana. Ao amin'ny taona 1994 ho 1997 niseho tamin'ny teny grika Yannim mpitendry mozika. Ao amin'ny 2006 dia nilalao ny fitetezam-paritra amin'ny Dixie voronkely. Nandritra ny asany dia efa niara-niasa tamin'ny mpihira hafa maro ny karazan-dahatsoratra isan-karazany, anisan'izany ny Ray Charles, Taylor Swift, John Cale, Christina Aguilera, Kanye West, Barry Manilow, Rusty Anderson sy ny tarika Black Light Burns sy Belle sy Sebastian. Izany ihany koa ny mpikambana ao amin'ny String quartet vitamina String quartet, izay specializes amin'ny hira ny vato isan-karazany sy ny mpihira pop toy ny Nirvana, ny varavarana sy ireo mpamono olona.
Fampisehoana ho an'ny sokajy tanora 2013 dia natao tao amin'ny 11. August 2013 ary miaina amin'ny foiben'ny US Fox. Sarobidy ireo olona avy any amin'ny sehatry ny mozika, sarimihetsika, tele, fanatanjahan-tena, lamaody sy ny Internet, tanora mpijery avy 13 mba 19 taona. Io no farany fifindran'ny Teen Safidy Awards natao tao amin'ny Gibson toerana iray fanaovana fampisehoana, izay nanomboka tamin'ny Septambra 2013 hatao ny The World Wizarding ny Harry Potter (The World herin'ny maizina ny Harry Potter). Fahagagana mahagaga: Breakthrough - 2. Part nahazo valo amin'ny sivy fanendrena, Pretty Little mpandainga nahazo fito rehetra ny fanendrena, ny sarimihetsika dity Perfect! zíslal efatra amin'ny iraika ambin'ny folo fanendrena, ny andian-dahatsoratra hafaliany nahazo efatra mari-pankasitrahana, ary koa ny Bruno Mars nahazo roa amin'ny valo fanendrena, Taylor Swift no nahazo roa ny fito fanendrena, Demi Lovato nahazo efatra mari-pankasitrahana, iray Direction nahazo enina mari-pankasitrahana (anisan'izany ny tombany ny Harry Styles. ny loka Selena Gomez sy Miley Cyrus no nahazo ny telo amin'ireo fanendrena enina.
Ny loka miavaka nataon'i Nickelodeon Kids dia natao tao amin'ny 27. March 2010 ao amin'ny Pauley Pavilion any Los Angeles. Nizara moderina ny mpilalao Kevin James. Nandritra ny hariva dia niseho i Miranda Cosgrove, Rihanna ary Justin Bieber.
Owen Pallett, avy amin'ny anaran'i Michael James Owen Pallett (* 7 September 1979) dia mozika Kanadiana, mpampihorohoro ary mpamorona. Notokanana tamin'ny mozika hatramin'ny fahazazany izy; Izy dia nanomboka nilalao ny lokanga tamin'ny faha-telo taonany ary namorona ny firafitra voalohany tamin'ny telo ambin'ny folo. Taty aoriana dia nibanjina an'i Enter the Haggis sy ny Picastro ary namoaka ny sangany voalohany voalohany, Has and Good Home (eo ambanin'ny lohateny Final Fantasy) ny 2005. Nandritra ny asany, niara-niasa tamin'ny mpihira hafa izy, toa an'i Taylor Swift na Linkin Park, The National and Arcade Fire. 2010 dia notendrena ho solontenan'ny Music Music Polaris. Tao amin'ny 2014, izy dia nomena anarana ho Oscar iray ho an'ny Hira Tsara Indrindra ho azy.
Megan Nicole Flores, fantatra amin'ny anarana hoe Megan Nicole (* 1. 1993 Septambra, Katy, Texas, USA) dia mpihira Amerikana-mpamoron-kira, mpilalao sarimihetsika sy ny modely izay nanaovan'ireo tao amin'ny YouTube in 2009.Raný životNarodila any Houston, Texas. Ny ray aman-dreniny dia atao hoe Frankie sy Tammy Flores ary manana anabavy iray Maddie Taylor. Lehibe tao izy Katy, Texas, ary liana amin'ny mozika hatramin'ny folo taona izy fony ny rainy nividy Karaoke. Nandritra ny sekoly ambaratonga faharoa dia anisan'ny fiangonana iray ihany koa izy.
Ny loka miavaka nataon'i Nickelodeon Kids dia natao tao amin'ny 2. April 2011 ao amin'ny Centre Galen any Los Angeles. I Jack Black dia nanamafy fanintelony fanintelony. Nandritra ny hariva, Big Time Rush sy The Peas Black Eyed ary mpihira Willow Smith dia natao.
Billboard Hot 100 no tabilao tokana malaza indrindra any Etazonia. Ny Hitparade dia natambatra isan-kerinandro hatramin'ny 1941. Billboard. Ny hira voalohany 100 #1 voalohany dia ny hira "Poor Little Fool" nataon'i Ricky Nelson avy amin'ny 4. August, 1958.HistoryNy fantatra ankehitriny hoe Hot 100, efa nisy dimy ambin'ny folo taona lasa izay izy io tamin'ny endriny maromaro. Nandritra ny taona 1940 sy 1950, ireo hira malaza dia natsangana tamin'ny sehatra telo lehibe.
Edward Christopher Sheeran (* 17. 1991 Febroary) dia mpihira sady mpamoron-kira anglisy amin'ny irlandey fakany. Taorian'ny fahazazany tany Framlingham, Angletera, dia nifindra tany Londres i 2008 mba hifantoka bebe kokoa amin'ny asany. Ao amin'ny 2009 312 nilalao fampisehoana izy sy teo am-piandohan'ny taona mahaleotena 2011 namoaka EP iray atao hoe No. Tetikasa fiaraha-miasa amin'ny 5, noho ny mari-pamantarana Asylum / Atlantic Records. Ary nahazo manokana amin'ny tokan-tena "Ny ekipa A", "Lego House" ary "Izaho Jereo ny afo". Natao tamin'ny 2011 ny lahatsary voalohany + ary nahazo ny loka Platinum tany Angletera. Ao amin'ny 2012 dia nahazo mari-pankasitrahana roa Brit Awards, fa irery Britanika tsara indrindra mpihira sy ny kintan'ny ny taona, raha ilay hira "Ny A Team" nahazo ny Ivor Novello Award ny hira tsara indrindra, eo amin'ny lafiny mozika sy ny soratra. Amin'ny 2014, manokana 23. 6., Avelao ny rakikira faharoa antsoina hoe ×, mihira Sing Sing. Tao amin'ny 2015 no namoronany ilay hira Sary, izay horonan-tsary Ed rehetra, avy amin'ny zazakely manontolo ka hatramin'izao.
Serayah Ranee McNeill (* 20 June 1995, Encinitas, California, Etazonia) dia mpilalao sarimihetsika Amerikana, mpihira sy modely. Ny ankamaroany dia fantatra amin'ny anjara asan'i Tianna Brown ao amin'ny andian-tantara Empire.
Joey Lynn King (* 30 Jolay 1999, Los Angeles, California, Etazonia) dia mpilalao Amerikana. Nibanjina an'i Ramona sy Beezus (2010), Crazy, Damn Love (2011), 2017.
Ronan dia lehilahy Anarana ny selta fiandohan'ny midika hoe kely tombo-kase. Irlandey teny dia teny Ron, izay nanampy ny tovana mpitondra án.Známí Ronan ny Locronan, ny irlandey olo-masin'i 6. stoletíRonan Bennett, irlandey spisovatelRonan Carolino Falcao, Ekoatera fotbalistaRonan Farrow, Amerikana mpanoratra sy aktivistaRonan Finn, irlandey fotbalistaRonan Hardiman, irlandey skladatelRonan Keane, irlandey soudceRonan Keating, irlandey zpěvákRonan Keenan, Afrika Atsimo spisovatelRonan Lee, Aostraliana politikRonan Mac Aodha Bhuí, irlandey hlasatelRónán MAC Colmáin, irlandey králRónán Mullen, irlandey politikRonan O'Brien, irlandey spisovatelRonan O'Gara, ny irlandey rugbistaRonan O'Rahilly, iray irlandey obchodníkRonan Pensec, French cyklistaRonan Queiroz Breziliana fotbalistaRonan Rafferty, irlandey golfistaRonan Sheehan, irlandey spisovatelRonan Thompson, Amerikanina, izay matin'ny homamiadana sy ny foto-kevitra ny hira neuroblastoma "Ronan" avy Taylor SwiftRonan Tynan, ny irlandey fahatelo sy paralympionikRonan toy ny atao hoe koa Colin Ronan, astronoma anglisy sy spisovatelDaniel Ronan, Ronan politikNiall Amerikana, irlandey rugbistaSaoirse Ronan, irlandey herečkaReferenceMiloslava Knapp, ny fomba Bu de zazakely fanomezana anarana? External Links
Ny lokan'ny safidin'ny olona dia natao tao amin'ny 9. January 2013 ao amin'ny Theater Theatre ao Los Angeles, Californie. Ny fifindrana dia nalefan'ny CBS sy Xbox Live. Ny fampihetseham-po dia nampifanarahan'i Kaley Cuoco. Nambara tamin'ny novambra 2012 ny nomena.
Fanantenana ho an'i Haiti Ankehitriny: Tombontsoa lehibe ho an'ny fanampiana ny horohorontany ny tombontsoa iray manampy ny niharan'ny horohorontany tany Haiti, notontosaina tamin'ny 23. Janoary 2010 tamin'ny fotoana 1: 00 mankany 3: 00 UTC, izay nanangona mihoatra ny roapolo tapitrisa pounds nandritra ny famindrana, ary ny fanomezana hafa dia tao amin'ny kaonty taorian'ny naharetany. Ny mpiaro ny fandaharana antsoina hoe "teleton" (mpamorona ny fahitalavitra sy ny marathon) dia mpikatroka George Clooney ary nanatrika mihoatra ny supernatural world 100.
Zach Gilford (* 14 Janoary 1982, Evanston, Illinois) dia mpilalao sarimihetsika amerikana sy televiziona. Ny anjara asany tsara indrindra sy mahomby indrindra dia ny andian-dahatsoratra, indrindra ny anjara asan'i Matt Saracen amin'ny zoma alina alina mandoro sy Tommy Fuller amin'ny sarintany.
MTV EMA 2013 (fantatra amin'ny hoe ny MTV Europe Music Awards) dia natao tamin'ny 10. Novambra 2013 ao amin'ny Ziggo Dome any Amsterdam, Holandy. Ity no fotoana voalohany hatramin'ny 1997, fony izy ireo koa tany Holandy.
Ny Hall of Fame (Songwriters Hall of Fame) dia loka amerikana mendrika nataon'ny Akademian'ny National Music of Popular Music. Noforonin'i Johnny Mercer tao amin'ny 1969, ary navoakan'ireo mpitory Abe Olman sy Howie Richmond. Ankoatra ireo mpihira nasongadina tao amin'ny Hall of Fame, dia misy loka maromaro manokana, toy ny loka Johnny Mercer, na ny loka ho an'ny Lifetime Achievement Sammy Cahn.
Aloka maizina dimampolo (ny haitao anglisy Fifty Dark Darkers) dia sarimihetsika Amerikana mahatsikaiky fanta-daza avy amin'ny 2017. Ny foto-kevitra dia mitovy amin'ny an'i El James, ny script ho an'ny horonantsary dia nosoratan'i Niall Leonard vadiny ary notarihin'i James Foley. Ny familiana dia fivoahana ho an'ny "Gray Shades of Gray". Dakota Johnson sy Jamie Dornan dia mamerina indray ny fitarihana indray.
Hannah Montana: Ny horonantsary dia lohatenin'ny "soundtrack" sy ny sarimihetsika. Ity horonam-peo ity dia ahitana hira 18, ny sasany amin'ireo dia efa lehibe, tsy ny hiran'i Miley Cyrus (Hannah Montana), fa ny hafa. Navoaka tamin'ny 2009.